I-iWatermark Pro Manual Mac & Win Ikhasi (JP)
IWatermark Pro inguqulo yakamuva yeWatermark yeMac neWindows. I-iWatermark uhlelo lokusebenza lwe-watermarking No. 1 emhlabeni lweMac, Windows, iPhone / iPad, ne-Android. Stylishly copyright zonke izithombe zakho nge-watermark ebonakalayo digital kungakapheli imizuzu. IWatermark Pro iyithuluzi elibalulekile labathwebuli bezithombe nanoma ngubani onekhamera yedijithali, ochwepheshe noma abaqalayo.
IWatermark iyithuluzi elikhethekile lezithombe ze-watermark. Isebenza kahle kakhulu, iyashesha, ilula futhi ayibizi kakhulu ukusebenzisa kune-PhotoShop. IWatermark yakhelwe kuphela i-watermarking.
IWatermark Pro yadalwa nguMark Fleming noJulian Miller. Umsebenzi wobuciko kaMichel Zamparo.
Ingabe ungathanda ukuhumushela iWatermark Pro olimini lwakho lwendabuko? Xhumana nathi.
Ithebula Layo Yonke Isoftware yeWatermark
Igama nemininingwane eminingi
Mac iWatermark IMac 10.9-12.0 + Thwebula 2.6.3 isixhumanisi
Windows I-iWatermark Pro
IWatermark Pro 2 7, 8.1 noma 10
64 bhithi, 10, 11 Thwebula
Izinguqulo ezindala ze-iWatermark Pro ye-Mac & Win
Ngezixhumanisi zokulanda nezidingo zohlelo
Isixhumanisi se-OS & Info
Izinguqulo ze-Mac Older
Mac 10.4, 10.5 noma 10.
I-Windows Older Version IWatermark 3.1.6
IWatermark 2.0.6 WINA XP noma ngaphezulu
Izithonjana zedrowa ezisetshenziswe ngaphansi kwelayisense kusuka ku- Bare Amathambo Software, Inc. Benza isoftware enhle kakhulu.
Ikhodi ye-MAAttachedWindow kaMat Gemmell.
IWatermark Pro ibiza u- $ 30. Ngemuva kokuyizama ngicela uye kweyethu esitolo ukuthenga. Ukungenisa ama-watermark wakho wangaphambilini kusuka ku-iWatermark uye kwi-iWatermark Pro iya kuthebhu ethuthukisiwe sebenzisa inkinobho yokungenisa ukulayisha ama-watermark nezilungiselelo ezindala.
Ngemibuzo kuqala, hlola imanuwali uma lokho kungayiphenduli bese uvakashela ifayela le- ukweseka ikhasi.
Uma unenkinga yokubhalisa chofoza lapha ukuthola imininingwane. Uma lokho kungakusizi ukuya kufayela le- ukweseka ikhasi.
Uhlu Lwezinye Izici
I-iWatermark Pro ilandela i-iWatermark futhi ibhala kabusha ngokuphelele esebenzisa i-Cocoa, i-Xcode, nobuchwepheshe bamuva be-Apple. I-iWatermark Pro uhlelo lokusebenza olusezingeni eliphezulu kakhulu lwe-watermarking olutholakalayo.
Inombolo Yezinhlobo ze-Watermark 8 Ngayinye Iwusizo Ngenjongo Ehlukile.
Sebenzisa i-Watermark engu-1 noma Amaningi Ngasikhathi sinye Okungenamkhawulo (ngokusekelwe kwimemori)
I-Watermark 1 noma Batch Inombolo Engenamkhawulo Yezithombe Okungenamkhawulo (ngokusekelwe kwimemori)
Izinhlobo ze-Watermark Umbhalo, i-Bitmap, i-Logo, i-Signature, i-Vector, i-Lines, i-QR, umbhalo ku-Arc, i-Text Banner, i-Border, i-Metadata ne-Stegomark
Speed 4x noma ngaphezulu, 64 bit
Icubungula Okufanayo Iyazi Ukusetshenziswa okuningiliziwe kwama-CPU / ama-GPU amaningi
Isenzo Sokufaka Hlunga izithombe zokufaka ngosayizi, ukulungiswa, igama, ifomethi, njll...
Izenzo Zokukhiphayo i-watermark, shintsha usayizi, qamba kabusha, dala izithonjana, engeza noma khipha imethadatha.
I-AppleScriptable (Mac Kuphela) Yebo, kufaka phakathi imibhalo nezikripthi zemenyu
I-Shell Extension ye-Win Explorer Qhafaza kwesokudla ukufaka ama-watermark ngqo.
Amaphrofayili Wemibala Isebenzisa amaphrofayili akhona futhi angakhethwa
Okukhiphayo 10 izinhlobo ezahlukene izilungiselelo okukhiphayo
Izinhlobo Zefayela Lokufaka I-RAW, i-JPG, i-PNG, i-TIFF, i-GIF, i-DNG, i-PSD
Izinhlobo Zefayela Lokukhipha jpg, png, tiff, psd, bmp, jpeg 2000, clipb
Buka kuqala Yebo, bese wabelana kusuka kusikrini sokubuka kuqala
Ishintsha usayizi Wezithombe Izinketho eziyisithupha ezinkulu
Ngenisa ama-watermark Yebo, kusuka kunguqulo ye-Mac noma ye-Win
Thekelisa ama-watermark Faka kungobo yomlando noma yabelana ngenguqulo ye-Mac noma ye-Win
Hlela ama-Watermark Dala ama-watermark angokwezifiso, phinda, susa, bonisa futhi uhlele izilungiselelo noma nini.
Ikhabethe le-Watermark Indawo ongagcina kuyo wonke ama-watermark akho, uhlele, uhlele, ukhiye, uhlole kuqala, wabelane futhi uyisebenzise ngokuthepha.
Metadata I-XMP, i-EXIF, i-IPTC kanye nemethadatha yosesho lwe-Google
Faka / Susa iMethadatha IPTC / XMP / GPS
Shumeka imethadatha ku-Watermark IPTC / XMP / GPS
Amathegi wemethadatha njengama-watermark Engeza i-IPTC, Tiff, File Attributes, Exif, GPS, tags to text watermarks ukuze ubone lolo lwazi ezithombeni
Effects I-emboss, umbhalo, okuphambene, okuveziwe, ithunzi elimnyama, ithunzi elimhlophe, njll...
Indawo ye-Watermark Setha ngokuhudula noma xy
Isikali Watermark Okwangempela (okuhlobene), okuvundlile futhi mpo (amaphesenti aphelele)
Ukufometha kombhalo kwe-Watermark ifonti, usayizi, umbala, ukuzungezisa, obala, isithunzi, umngcele, njll...
Background umbala, ukukhanya, isikali, umngcele, isithunzi, ukujikeleza
Usizo Ku-inthanethi, ingqikithi futhi inemininingwane
Amakhodi we-QR njengama-Watermark Dala amakhodi we-QR asetshenziswa njengama-watermark
Ama-Watermark we-Creative Commons Ungeza kalula noma iyiphi i-watermark ye-CC
I-Quick Look Plugin Ibonisa imininingwane ye-watermark ethunyelwa kwamanye amazwe
Isebenza nazo zonke Iziphequluli Zezithombe Yebo
Thumela futhi wabelane Isipele, yabelana ngama-watermark kwamanye amadivayisi wakho nabangane.
Easy ukusebenzisa Ngokujulile, kulula ukuyisebenzisa
Iphinda amafayela angempela kanye nama-watermark lawo. Ungalokothi uthinte amafayela akho asekuqaleni. Futhi yenza isipele amafayela akho asekuqaleni ngokuzenzakalela. Noma ungakuvala lokho kokuthi Okuthuthukisiwe:Okucatshangelwayo
Kungani usebenzisa iWatermark Pro Ngaphezu Kwezinye Izinhlelo
I-iWatermark ayibizi kakhulu, iyashesha futhi ilula nge-watermarking kune-Photoshop ngoba yenzelwe kuphela i-watermarking nokuhamba komsebenzi kwabathwebuli zithombe abangochwepheshe.
IWatermark yenzelwe iMac, Windows, iOS, ne-Android. iWatermark Pro. Ukwabelana ngama-watermark phakathi kwalezi zinhlelo zokusebenza kuzokwenzeka ekuqaleni kuka-2017
Izinhlobo ezingama-watermark eziyi-11. Ezinye izinhlelo zokusebenza zine-1 noma 2 kuphela.
IWatermark ingaqamba kabusha amaqoqwana wamafayela, ifayele amafayela wokufaka, futhi ishintshe usayizi wamafayela ezithombe.
I-iWatermark icubungula izithombe ze-RAW iningi ezingazenzi.
I-iWatermark ingangeza noma isuse imininingwane ye-IPTC / XMP ngesikhathi sokucubungula kwezinqwaba zezithombe.
OKUBALULEKILE - nge-iWatermark ungasebenzisa izithombe zezinqumo ezihlukile nokuqondiswa kuqoqwana bese ugcina i-watermark esithombeni ngasinye ibukeka ngokufana ngenxa Ukulinganisa ithuluzi. Isikali sisho ukuthi i-watermark ingathatha amaphesenti ngqo wobubanzi kungakhathalekile ukulungiswa noma ukuma kwesithombe ngasinye.
I-iWatermark inesihleli se-watermark esiyinkimbinkimbi esingadala umbhalo, i-arc yombhalo, i-banner yombhalo, i-graphic, i-vector, ulayini, i-QR, imethadatha kanye nosayizi bama-watermark.
I-iWatermark ingakha i-watermark eshumeka idatha ye-IPTC / XMP njalo lapho isetshenziswa noma ingekho i-watermark ebonakalayo. Ilungele izinhlangano zezindaba.
IWatermark ishesha ngokwedlulele okuyinto ebalulekile njengoba osayizi befayela nokusebenza kwamaqoqo kuqhubeka nokukhula.
IWatermark igcina i-database yawo wonke ama-watermark angasetshenziswa ngokuchofoza.
Kukhona izinhlelo zokusebenza ezifana ne-Photoshop ezingasakaza isithombe kodwa i-iWatermark inomphathi we-watermark ongalandela amakhulu ama-watermark. Imenenja ibuye ivumele ukukhiya / ukuvula, ukushumeka i-IPTC / XMP, ukusesha, ukuqamba kabusha igama, ukususa, ukubuka kuqala, ukuhlanganisa, ukuthekelisa, ukucubungula i-batch nokwabelana ngama-watermark.
OKUBALULEKILE: Ungalokothi ususe amafayela wakho woqobo. I-watermarking ikopisha ifayela lakho loqobo bese ingeza i-watermark ebonakalayo kulo. IWatermark ayishintshi eyangempela idala kuphela ikhophi. Ngakho-ke, hlala ugcina amafayela wakho wangempela angagciniwe ukuze uwagcine ephephile. Lokhu kucace bha kuwe kepha kufanele kushiwo kubaqalayo.
Mac: Landa kusuka kusayithi lethu bese uhudulela kufolda yohlelo lokusebenza. Ukufaka futhi amafonti asetshenziswe ku-iOS landa lokhu bese ufaka amafonti ofuna ukuwasebenzisa:
Windows: Landa bese ufaka usebenzisa isifaki.
Amafonti: Ukufaka amafonti asetshenziswe ku-Android naku-iOS landa leli fayela bese uvula iziphu bese ufaka amafonti ofuna ukuwasebenzisa.
OKUBALULEKILE: Abasebenzisi beWindows abaneZibonisi ezinokulungiswa okuphezulu. Ukuhlangenwe nakho okuhle kakhulu komsebenzisi shintsha izilungiselelo ze-Windows OS zohlelo lokusebenza lweWatermark Pro. Landela le miyalo emi-2 elula.
1. Kwesokudla, chofoza isithonjana se-iWatermark Pro bese ukhetha ukuhambisana bese ukhetha ukushintsha inkinobho yezilungiselelo ze-DPI ephezulu bese ukhetha "Khipha ukukala okuphezulu kwe-DPI" bese usetha kusistimu (Enhanced). Kubonwe esithombeni esingezansi.
2. Qhafaza kwesokudla kwideskithophu ukuze ubone le ngxoxo. Thepha izilungiselelo zokubonisa ezibonwe kusikrini esingezansi.
Shintsha 'Izilungiselelo Zokubonisa' (ongakukhetha) kubonwe kufayela le- isithombe-skrini esingezansi, ekunambithekeni kwakho futhi kuya ngamehlo akho. Uma uthola ukuthi amawindi e-iWatermark mancane kakhulu, ukulungisa ukusethwa kwe-Display kuya ku-150% noma ku-200% futhi ulungise izilungiselelo zohlelo lokusebenza lwe-iWatermark 'Zokuhambisana' (esinyathelweni 1 ngenhla) ukukala amawindi phezulu. Ngemuva kwalokho usethelwe. Lezi zilungiselelo ze-iWatermark zikhunjulwa kuzo zonke izibuyekezo.
Isifundo Sokuqalisa Ngokushesha
Noma iWatermark ingenza izinto eziningi (yenza usayizi, iqambe kabusha, njll.) Ukusetshenziswa okuvame kakhulu ukwenza izithombe ze-watermark. Lesi sifundo esiyisisekelo sizokuqondisa ekubekeni i-watermark esithombeni. Izithombe-skrini zenziwe kwi-Mac kepha kufanele zibukeke ngokufanayo kunguqulo ye-Windows.
Khetha noma uhudulele ku-'Input Well 'isithombe noma izithombe kanye / noma amafolda ezithombe ezizocutshungulwa.
Khetha / gqamisa i-watermark noma ama-watermark (yebo, i-iWatermark ingakwazi ukubheka nge-watermark engaphezu kweyodwa ngasikhathi sinye) kudrowa ye-watermark ngakwesokudla.
Dala ifolda kudeskithophu yakho bese ukhetha noma uyihudulele ku- 'Output Well'.
Shaya inkinobho yokuQala Ukucubungula.
Kwenziwe! Hlola ifolda yokukhipha yezithombe zakho ezinamanzi
OKUBALULEKILE: Ungasebenzisa ama-watermark amaningi njengoba ufuna ukusebenzisa ngasikhathi sinye esithombeni noma ezithombeni. Kungaba nemethadatha eyodwa kuphela noma i-stegomark esithombeni noma ezithombeni ngasikhathi.
I-watermark ngayinye ekhethwe kwi-Watermark Manager yengezwe esithombeni noma esithombeni ngasinye kuqoqo. Ungakhetha i-watermark engaphezu kweyodwa ku-Watermark Manager ngendlela ejwayelekile yokukhetha. Chofoza kanye ukuze ukhethe i-watermark eyodwa. Qhafaza u-Shift eqenjini ukuze ukhethe ngokuqhubekayo. Qhafaza umyalo ku-Mac noma u-Control-click ku-Windows ukuze ukhethe ukungasebenzi.
Qala ngokwakha i-watermark yombhalo. Ezinye izinhlobo ze-watermark zenziwe ngendlela efanayo. Ukwakha i-watermark yakho yokuqala vula ikhabethe le-Watermark Manager (bona ngezansi ividiyo / izithombe).
Ngezansi kwesobunxele se-'Watermark Manager 'chofoza inkinobho eluhlaza okwesibhakabhaka + (bona ngenhla ividiyo / an
imation) ezansi kwedrowa.
Enye indlela ukuya kwimenyu yefayela bese ukhetha iNew Watermark noma umyalo uN.
Imenyu yokwehla ivela, khetha 'Umbhalo ...' ukwakha i-watermark yombhalo entsha.
Uzobona lo mhleli we-watermark (ngezansi) ovumela ukushintsha izilungiselelo ze-watermark yombhalo.
Faka umbhalo. Shintsha ifonti, usayizi, umbala, nokuqondanisa, njll njengoba ufisa. Nikeza i-watermark igama elihle elibonakalayo, shaya inkinobho ethi 'Kwenziwe' futhi izogcinwa ku-'Watermark Manager 'lapho ungayikhetha khona noma kunini lapho ufuna ukuyisebenzisa futhi ukuze ubuke isithombe.
Njengamanje, kunezinhlobo eziyi-10 zama-watermark. Ama-watermark abonakalayo angama-watermark abonakala ezithombeni. Umbhalo, Umbhalo ku-Arc, i-Text Banner, i-Bitmap Graphic, i-Vector Graphic, i-Lines, i-QR-Code ne-Border. Izinhlobo ezi-8 ezingabonakali ze-wagtermark, iMetadata neStegomark. Okuningi kuyeza.
Ngezansi sixoxa ngamasethingi wohlobo ngalunye lwe-watermark ngokuningiliziwe.
Thumela umbhalo ku-Watermark
Ama-watermark wombhalo kulula ukudala. Umbhalo ubukhali kunoma yisiphi isayizi futhi uncike kumafonti atholakalayo. I-iWatermark + inikeza ukufinyelela kwamafonti amahle angama-292 (amaningi amafonti we-Google) ngaphezu kwamafonti wesistimu.
Isithombe-skrini esingenhla sikhombisa zonke izilungiselelo ozibonayo lapho udala i-watermark yombhalo.
1) Thayipha- Setha imenyu yokwehla iye kolunye lwezinhlobo ze-watermark.
2) Igama- Setha igama olifunayo ku-watermark
3) Okuqukethwe-Setha okuqukethwe kwe-watermark yombhalo.
4) Faka - Faka kokuqukethwe izinhlamvu ezikhethekile njenge- © symbol ye-copyright noma ™ yophawu lwentengiso, njll. Futhi ungafaka amathegi okuguquguqukayo kolwazi lwe-IPTC noma i-EXIF esithombeni. Imininingwane engaphezulu ilapha.
5) Ifonti- Setha Ifonti bese ulungile Usayizi Wefonti.
6) Umphumela- Isetha umphumela njengokuqoshwa, i-emboss, i-inverse, njll. Ngakwesokudla se-Effects, setha umbala wefonti, isithunzi sombhalo, kanye nokukhanya kokukhanya okudala leso sithunzi.
7) Umbala Wangemuva- Beka umbala ongemuva nemininingwane ye-Border
8) Ukuqondanisa- Setha ukuqondanisa (kwesobunxele, maphakathi, kwesokudla) sombhalo nokunamathisela okubeka ngaphezulu ukugoqa / isikhala esizungeze umbhalo.
9) Ukuzungezisa- Shintsha ukujikeleza kombhalo.
10) Ukukhanya- Setha i-Opacity / Transparency.
11) Ukukala- Lokhu kuhlukanisa iWatermark ngoba kunika izinketho zokukala okuhlobene ngokuphelele.
Isihlobo (%) - ukulungiselelwa okuzenzakalelayo, okulula ukuqondakala nokusebenzisa. Yenza lokho abantu abaningi abakufunayo. Esimweni semodi yesihlobo sisethwe ngu-% kusuka emaphethelweni. Akunandaba nosayizi wesithombe uzothola imiphumela efanayo yokubukeka. Usayizi / isikhundla se-Watermark kuthinteka ubukhulu bezithombe Ekhasini lesithombe lokhu kulungiselelwa kukuvumela ukuthi usethe ukuma okuhlobene kwe-watermark (by%) kungakhathalekile ubukhulu nosayizi wesithombe ngasinye kuqoqo. Isibonelo: kuqoqo lezithombe ezi-2, esisodwa siphansi nesinye isixazululo esiphakeme, i-watermark yomngcele isethwe ukuba ibe ngamaphikseli ayi-10 ububanzi esithombeni esisodwa sokuxazulula okuphansi kungenzeka uma kulinganiswa kube ngamaphikseli angama-20 ububanzi esithombeni sokucaca okuphezulu. Esikhathini esedlule besinemodi ye- "Relative" kuphela, kepha abanye abasebenzisi bacele i- "Absolute".
Absolute (pixels) - setha konke, isikhundla, amafonti, imingcele, ihluzo nakho konke kushintshiwe ukuze kusetshenziswe ngamaphikseli. Imodi yamamethrikhi ye- "Absolute" yenza osayizi / izikhundla zayo yonke into ezimele ngosayizi wesithombe. Usayizi we-Watermark nesimo kuzohlala kufana (ngamaphikseli) kuzo zonke izithombe. Isibonelo: kuqoqo lezithombe ezi-2, esisodwa siphansi nesinye isinqumo esiphezulu, i-watermark yomngcele ebekwe kumaphikiseli ayi-10 ububanzi kuzo zombili izithombe ingaba ngamaphikseli ayi-10 ububanzi.
Isihlobo esokusetha indawo ye-watermark ngamaphesenti. Lokhu kubalulekile lapho ufuna ukuthi i-watermark ivele ngosayizi ofanayo nasendaweni efanayo enqwaba yezithombe ezingaba izinqumo ezahlukahlukene, osayizi nokuqondiswa.
Ku-skrini ungabona imenyu yokwehla yokukala isethwe ku-'Akukho Scaling 'ngokuzenzakalela. Lokho kusho ukuthi awusebenzi ku-% kepha ngamaphikseli.
Zonke izinketho zokukala zibonakala kumenyu eyehlayo ngenhla kwe-'Akukho Ukulinganisa ',' Isikali Esivundlile Kuya ku: 'Kanye' ne-Vertical Scale To: '
No Scaling - isetha ukukala ukuze isebenze ngamaphikseli.
Isikali Esivundlile Ku: - isetha isikali ukuthi sisebenze ngokuvundlile ku-%.
Isikali Esimile Ku: - isetha isikali ukuthi sisebenze ngokuqondile ku%.
12) Ithayili lokumboza isithombe - uphinda umbhalo izikhathi eziningi kusithombe sonke. Lokhu kubalulekile kulabo bantu abafuna ukuqinisekisa ukuthi ayikho ingxenye yesithombe esithathiwe.
13) Iphini - ikuvumela ukuthi usethe indawo ye-watermark ngendlela yokuthi iyafana kuzo zonke izithombe, noma ngabe zinokuxazululwa kanjani noma ukuma ngakuphi (i-portrait noma i-landscape). I-Pin ivumela ukusetha indawo ngendlela ejwayelekile eya phezulu, kwesobunxele noma ezansi, kwesokudla, njll.
14) Indawo- Uma ususethe indawo ejwayelekile ngePin ungakucacisa lokho. Ngezansi ubona i-'Offset X 'ne' Offset Y '. Ngokuya ngokuthi iyiphi iPhini oyikhethile ungashintsha u-X no-Y, u-X noma u-Y. U-X uyinkomba evundlile bese u-Y uyinkomba eqonde mpo.
Uma uthengisa isithombe esisodwa kunezindlela ezilula zokusetha indawo kepha isizathu sokuthi kufane nalokhu sivumela ama-watermark ukuthi avele endaweni efanayo noma ngabe ubheka isithombe esisodwa noma eziyinkulungwane zamasayizi nokuqondiswa okuhlukile.
I-Text Watermark inezilungiselelo eziningi kakhulu ngakho-ke siqale ngayo. Kuhlobo ngalunye lwe-watermark olulandelayo sifaka kuphela incazelo yamasethingi angafakiwe kwi-Text Watermark.
Amathegi kuma-Watermark wombhalo
Amathegi awusizo olukhulu. Sebenzisa i-'Ins Tag (s) 'kuzo zonke izilungiselelo ze-watermark (okubonwe ngenhla) ukubeka iMetadata (njengemodeli yekhamera, usuku lokudala, izinombolo ezilandelanayo, igama lefayela, indawo, njll.) Kusuka kuleso sithombe noma ividiyo ibe yi-watermark ebonakalayo kulokho isithombe noma ividiyo. Sebenzisa lokhu ukudala i-watermark yakho egcizelele ukubonisa imininingwane ehlukahlukene ezithombeni zakho ezohluka ngokuya ngemethadatha ekuso leso sithombe.
Lokhu kungasetshenziswa ngezindlela ezahlukahlukene. Nasi isibonelo.
Abagwedli abadala nabancane. Kauai. 2007 © julian umgayi
Isibonelo 1: Ake sithi ufuna ukubeka inombolo ehlukile, njengenombolo ye-serial esithombeni ngasinye kuqoqo le-119. Kulokhu okungenhla isithombe-skrini ungabona ukuthi ama-tag namathegi afakwa kanjani ku-watermark yombhalo futhi ibekwe esithombeni. Manje isithombe ngasinye esiseqoqweni sizoba ne-Counter neTotal ehlukile. Ingabonakala isebenza ezansi kwesobunxele sesithombe ngenhla ku-zoomed esithombeni esingezansi. Lokhu kukhombisa ukuthi izithombe zibalwa zonke ngendlela efanele kuleli cala, inombolo engu-021 kwezingu-119. Kuyasiza kakhulu!
Lesi sithombe senzelwe ukusondeza engxenyeni yesithombe esingenhla esibonisa ithegi yezinombolo esetshenziswayo.
Isibonelo 2: Faka i-Latitude ne-Longitude ezithombeni ezi-1 noma eziyi-10,000 usebenzisa amathegi. Kubonwe ngakwesokudla ngenkathi wenza i-watermark ngokubuka kuqala.
Isibonelo 3: Ake sithi ungumbuyekezi wamakhamera wephephabhuku noma iwebhusayithi futhi ufuna ukuhlola izithombe kusuka kukhamera ethile. Ukuze wenze lokhu udinga ukukhombisa ama-specs ahlukene ngamakhulu ezithombe ezithathwe ngezindlela ezahlukahlukene ezahlukahlukene. Umsebenzi onzima wenhlangano. Amathegi e-iWatermark enza lo msebenzi ube lula kakhulu ngoba manje usungabeka ama-specs amasethingi ekhamera, nganoma yisiphi isikhathi esithathiwe isithombe, esithombeni ngasinye.
Lesi sithombe sikhombisa amalebula anamathegi akhombisa igama lethegi ne-GPS (latitude nobude) besithombe esithile.
Umbhalo Ku-Arc Watermark
I-Arc Text Watermark ikhiqiza i-watermark yombhalo endleleni egobile.
Ngakwesokudla kukhona zonke izilungiselelo ze-Text Arc. Inezilungiselelo ezibonakala ku-watermark yombhalo nokuningi. Lezo zilungiselelo ezingeziwe zichazwe ngezansi.
I-Autosize Radius - isetha ngokuzenzakalela irediyasi edingekayo ukulingana umbhalo ukuze kuphele ukuhlangana. Lokhu kweqa iRadius engezansi.
Radius - umbhalo ngaphandle kwe-arc
Umbhalo u-A noma u-∀ - nika umbhalo ohlangothini lwesokudla ubheke phezulu noma phezulu.
I-engela - ijikelezisa umbhalo ezungeze i-arc.
I-engela - shintsha i-engeli yombhalo ku-arc. Noma jikelezisa i-engela ngombuthano ngesithonjana samachashazi.
Ezinye izilungiselelo ezingashiwongo lapha zizotholakala kuzilungiselelo ze-Text Watermark ngenhla.
Umbhalo Ku-Banner Watermark
Isibhengezo ngumbhalo onengemuva elilungisekayo.
Ngaphezulu ibhokisi lezilungiselelo le-watermark ye-Banner. Njengoba ukwazi ukubona kubeka isibhengezo esingalungiseka kunoma iluphi uhlangothi lwesithombe. Amasethingi ajwayelekile, iningi lawo liyafana ne-Text watermark. Umehluko kuphela inkinobho yomsakazo evumela ukukhetha okuqondile noma okuqondile.
IBitmap / Logo / Graphic Watermark
Ama-Watermark we-Graphic alungele ama-logo, ubuciko namasiginesha. Sebenzisa i-logo yakho noma imuphi umdwebo kodwa kudingeka abe ifomethi ekhethekile yemidwebo ebizwa nge-.png enengemuva elisobala. Amasiginesha wesampula, izimpawu neminye imidwebo esiyifakayo inezizinda ezisobala futhi ingamafayela we-.png. Lokho kusho ukuthi noma ngabe umdwebo uyisikwele kuphela isiginesha uqobo ekhombisa nokuthi lokho okungekona ukusayina kusobala okuvumela isithombe sangemuva ukuthi sibonakale. Ifomethi yefayela yokwenza lokhu ibizwa ngokuthi i-.png ngokusobala futhi ivumela isizinda se-watermark ukuthi sibonakale (i-.jpg ayikuvumeli lokhu kukhanya, .png kufanele kusetshenziswe).
Ingxoxo yezilungiselelo ze-Bitmap Graphic watermark.
Lokhu kwenzelwa amalogo nobunye ubuciko bokuqhafaza.
1. Kumhleli we-watermark chofoza u-'Engeza Umdwebo Omusha '. Ungakhetha noma yiliphi ifayela lokuqhafaza elifana nelogo yakho ukuze wenze njenge-watermark. Imidwebo ihamba phambili uma kungamafayela we-.png ngokusobala ngakho ingemuva alibonisi. Bona i- Imibuzo Evame Ukubuzwa Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe.
2. Chofoza kunoma yimaphi Amathuluzi ukushintsha ifayela le- Ukujikeleza, obala, njll. Yinike igama bese ushaya ukulondoloza.
3. I-watermark yakho entsha ingezwe kwimenyu eyehlayo (ebonwe ngenhla). Khetha noma okunye ukufaka isithombe se-watermark. Sebenzisa inkinobho - ukususa i-watermark ekhonjisiwe
Amasiginesha - engeza isiginesha yakho njenge-watermark usebenzisa iBitmap Watermark.
Udinga ifayela le-.png lesiginesha yakho. Lokhu kungadalwa ngezindlela ezahlukahlukene.
Indlela elula ukuyicela kumqambi wakho wezithombe.
Zenzele. Okokuqala, sayina igama lakho ngepeni elimnyama noma umaki ephepheni elimhlophe.
Okulandelayo, sebenzisa ifoni yakho ukuthatha isifinyezo sesiginesha yakho ephepheni noma usebenzise isithwebuli sedeskithophu.
Sebenzisa i-photoshop noma sebenzisa uhlelo lokusebenza lokubuka kuqala oluza kuwo wonke ama-Mac.
Amamaki ama-watermark avame ukubonakala esetshenziswa izinkampani zezithombe zesitoko. I-Lines watermark idonsela lokho kuphuma maphakathi nesithombe. Umqondo omkhulu ukuthi le yindlela enamandla yokuvimbela abantu ukuthi bakopishe izithombe ngoba kungadala umsebenzi omningi ukwenza leyo migqa inyamalale njengoba ihlanganisa izindawo eziningi zesithombe.
Amasethingi we-Line watermark akhonjiswa kusibonelo sesithombe-skrini. Izilungiselelo zicace bha. Kuyafaneleka ukubahlola bonke ukuze ubone kahle ukuthi benzani. Isethingi esingacacile i-opacity etholakala ngemuva kokuchofoza kumbala womugqa. Ingxoxo ibonakala ezansi kwesokudla kwesithombe-skrini esingenhla. Ngezansi kwaleyo ngxoxo ibha yokudonsa ye-opacity.
Ikhodi ye-QR (imele ukuthi “Ukuphendula Ngokushesha”) yikhodi engafundwa ngomakhalekhukhwini engagcina ama-URL ewebhusayithi, umbhalo ocacile, izinombolo zocingo, amakheli e-imeyili kanye neminye imininingwane yezinombolo ezifika ku-4296. I-QR ingenza i-watermark enkulu.
Isithombe sesibonelo se-QR ngezansi siphethe i-URL yewebhusayithi yethu, https://plumamazing.com. Zombili izinhlelo zokusebenza zekhamera ku-iOS (ku-iOS 11) kanye nohlelo lokusebenza oluhlanzekile lwe-Android Camera lungaskena futhi lusebenze kulwazi ngekhodi ye-QR. I-Chrome nayo ingafunda amakhodi we-QR kuzo zombili i-Android ne-iOS. Kukhona nezinye izinhlelo zokusebenza eziningi zokuskena ze-QR ezitholakala ezitolo zohlelo lokusebenza. Skena ikhodi ye-QR engezansi bese uthola ithuba lokuya kusayithi lethu ngokuzenzekelayo. Ungenza eyodwa yesayithi lakho noma kunoma yiliphi ikhasi elinemininingwane ofuna ukuyibonisa.
Izibonelo zokusetshenziswa. Ama-QR angasebenza njenge-watermark ezithombeni nakwezinye ihluzo ezingabamba igama, i-imeyili, i-URL yokuyisa abantu kusayithi lakho noma eminye imininingwane ngokuya ngobuhlakani bakho.
1. Othile angahle abe namamaki we-QR wesixuku sezithombe futhi i-QR ngayinye ingaholela ekhasini layo lewebhu ngolwazi lendawo, izimo, amanani entengo, njll.
2. Watermark izithombe zakho nge-QR equkethe i-URL yakho, i-imeyili, i-copyright, nolunye ulwazi. Kuhle ukugcina ukuxhumana kwakho nesithombe se-Facebook, Twitter, neminye imithombo yezokuxhumana. Uma ulayisha isithombe kumasayithi wokuxhumana nabantu bavame ukususa imethadatha. Amasayithi omphakathi awasusi ama-watermark abonakalayo njengombhalo, isiginesha, ihluzo noma ama-QR.
3. Yenza ividiyo efundisayo kuVimeo, i-YouTube, njll noma indawo yakho. Faka isixhumanisi esiqondile kuvidiyo yakho ku-QR. Thola elinye iphepha lokuphrinta izitika bese uprinta inqwaba yala makhodi we-QR. Manje shaya le khodi ye-QR kumanyuwali. Lapho umsebenzisi edinga usizo olubukwayo angakwazi ukuskena i-QR ukuze aye ngqo kuvidiyo.
Olunye uhlobo oluwusizo yiBorder Watermark. Isebenzisa ubuciko be-SVG (ukuhumusha okuphelele kubo bonke osayizi) ukudweba imingcele ezungeze isithombe sonke kanye ne-scrollwork emakhoneni.
Imethadatha iyizinhlobo ezahlukahlukene zolwazi mayelana nesithombe. Ama-watermark emethadatha alula kakhulu ukudala.
IStegoMark yiWatermark steganographic watermark. Le yi-watermark efihla imininingwane emininingwaneni yombala wesithombe uqobo. Isithombe sombala empeleni siyizinombolo eziningi. Izinombolo ezichaza umbala nendawo. Kulezi zinombolo eziningi kangaka, kunesikhala sokufihla ezinye izinombolo ezimbalwa. Yilokho uStegoMark akwenzayo ngokufihla imininingwane oyifunayo kudatha yesithombe bese ususa ukubhala ngemfihlo leyo datha efanayo. I-StegoMark idaliwe futhi ihlukile kwi-iWatermark.
Umuntu othile angakhipha ama-watermark akho abonakalayo esithombeni sakho kepha iStegoMark inamathuba amaningi okuthi ihlale ishumekiwe esithombeni ngoba ayibonakali futhi iyakwazi ukumelana nokucindezelwa kwe-jpg, ukunqampula nezinye izinguquko kune-watermark ebonakalayo.
OKUBALULEKILE: I-1 StegoMark kuphela engasetshenziswa ngasikhathi. Ngenkathi ungakhetha ama-watermark amaningi abonakalayo (umbhalo, ingcaca, i-qr, njll.) Ngasikhathi sinye ukusithengisa isithombe. Awukho umkhawulo enanini lezithombe ezicutshungulwa nge-StegoMark ngasikhathi sinye.
OKUBALULEKILE: Izinhlamvu ezingama-25 noma ngaphansi (kunconyiwe) ku-StegoMark ikuvumela ukuthi kube namandla kakhulu lapho igcina kabusha / iphinda icindezela isithombe se-watermark .JPG. Kungasetshenziswa kuze kufike ku-80 kepha kuzothinta ukuqina komyalezo. Khumbula ungasebenzisa isifinyezi se-URL ukwenza i-URL ibe ncane ukushumeka.
OKUBALULEKILE: I-StegoMark isetshenziswa kahle ezithombeni ezi: Izithombe zokulungiswa okuphezulu. Izithombe ezinamaphethini ahlukile, imibala, ukwakheka zingabamba imininingwane ethe xaxa kusuka ku-Stegomark.
Isibonelo 1: Isithombe sokucaca okuphansi esinomkhathi omkhulu wesibhakabhaka esiluhlaza okwesibhakabhaka singabonisa ubuciko. Izinombolo ezakha lesi sithombe ziyafana futhi zihleleke kakhulu. Kukhona i-entropy encane ngakho-ke ikamelo elincane litholakalela imininingwane ye-StegoMark.
Isibonelo sesi-2: Isithombe sokucaca okuphezulu kwehlathi, izihlahla, utshani, noma isibhakabhaka sine-entropy ethe xaxa (ngokuya ngezinombolo zonke ezenzayo) ngakho-ke kunendawo eyengeziwe yolwazi lweStegoMark.
I-StegoMark ukuqaliswa kokuqala kwe-watganographic watermark yezithombe futhi kutholakala kuphela ku-iWatermark. I-Steganography ibhekisa kunoma iyiphi inqubo yokushumeka enye idatha ngokungabonakali kudatha yangempela yesithombe.
I-StegoMark ngoba ihlanganisa iSteganography, evame ukubizwa ngeStego ngamafuphi noMark asuka egameni elithi Watermark. I-StegoMark isebenzisa i-algorithm ekhethekile eyenzelwe ePlum Amazing. Lokhu kufakwa kwekhodi okukhethekile kwenza leyo datha icishe ingenzeki ukuyiqonda ngaphandle kweWatermark. Uma kungekho iphasiwedi khona-ke noma iyiphi ikhophi ye-iWatermark ingaveza umbhalo ofihliwe ofihlwe esithombeni yi-iWatermark. Uma kukhona iphasiwedi khona-ke kuphela umuntu onephasiwedi ne-iWatermark ongadalula umbhalo ofihliwe.
Enye indlela yokusebenzisa iStegoMark ukufaka i-imeyili yakho noma i-URL yebhizinisi esithombeni. Lokhu kanye neMetadata kanye ne-watermark ebonakalayo kunikeza izendlalelo ezahlukahlukene zokuvikelwa kumininingwane yakho futhi inamathiselwe esithombeni. Isendlalelo ngasinye se-watermark esihlukile sizomelana ngezindlela ezahlukahlukene izinto ezingenziwa esithombeni njengokunqampuna, ukugcina kabusha, ukuqamba kabusha, njll ukugcina imininingwane yakho yobunikazi.
Ukuqala uvule ikhasi le-'Watermark Manager 'bese ukhetha isithonjana esiluhlaza okwesibhakabhaka' + 'futhi uzobona le menyu yokwehla:
Khetha into yokugcina uStegoMark…
Ngegama elithi 'Igama' faka igama elihle elichazayo lale StegoMar.
Uma ufaka kokufakwayo iqoqo lezithombe futhi une-stegomark ekhethiwe, inqubo yokushaya bese idayalogi iyavela icela iphasiwedi noma iphasiwedi.
Ku- 'Umbhalo' faka umbhalo ofuna ukuwushumeka kudatha yesithombe.
Ungasebenzisi i-password noma ubani one-iWatermark Pro angafunda umyalezo kodwa akekho omunye umuntu. Ukuze uthole ubumfihlo obuningi, faka iphasiwedi, bese kuthi umuntu onephasiwedi ne-iWatermark Pro kuphela akwazi ukufunda lowo myalezo wombhalo ongcwatshwe kwimininingwane yezithombe.
Uma lokhu sekwenziwe, thumela isithombe se-StegoMark'ed. Bheka isigaba esilandelayo esithi 'Reading A StegoMark' ukubona ukuthi ungabona kanjani imininingwane yakho efihliwe.
Izindlela ezi-2 Zokwembula iStegoMark
Indlela yokuqala futhi elula yokufunda iStegoMark ukuya kumenyu yefayela, khetha into ebizwa ngokuthi 'iSegoMark Viewer'. Hudulela isithombe sakho ngaphakathi, noma sebenzisa inkinobho yokukhetha. Uma ingekho iphasiwedi izokuveza ngokushesha okuqukethwe. Uma kukhona iphasiwedi bese uthayipha iphasiwedi bese ushaya u-'Sebenzisa '. Lapha umbhalo odaluliwe uthi 'Isithombe nguMark Fleming'.
Indlela yesibili yokufunda iStegoMark, vula isithombe esithunyelwe nge-StegoMark esithunyelwe ngokusiwisela kuthreyi yokufaka ye-iWatermark Pro noma usebenzise okuvulekile kusuka kumenyu yefayela.
Ngemuva kwalokho onqenqemeni lwesobunxele lwethreyi lokufaka thepha u- i ngombuthano osizungezile isithonjana. Lokho kuzovula iwindi lolwazi. Chofoza kusithonjana seStegoMark kuleli windi lolwazi njengoba kubonakala kusithombe-skrini esingezansi. Faka iphasiwedi uma unayo.
Main Iphaneli Yezilungiselelo
Kulesi sigaba sizodabula ithebhu ngayinye phezulu kwewindi eliyinhloko bese sinikeza imininingwane eyengeziwe.
Ithebhu ngayinye kubha yamathuluzi ngenhla ihambelana nendawo ebhekana nezinhlobo ezithile zezenzo.
Iwindi eliyinhloko ku-iWatermark Pro. Indawo lapho uzokwenza khona i-watermarking yakho.
Okokufaka - lapho ukhetha khona izithombe zokufaka. Chofoza kule ndawo ukuze ukhethe ifayela noma ifolda noma vele uhudule kufayela noma amafayela ofuna ukuwacubungula. Indawo yokufaka ibonisa izithonjana zeziphi izinhlobo zamafayela ezihudulwa (i-JPEG, i-PNG, i-RAW, njll.) Futhi ikhonjiswe lapho amafolda nawo.
Chofoza u-X ukuze ususe amafayela / amafolda akhethiwe.
Chofoza ingilazi ekhulisa ukubona indawo yamafayela.
Chofoza u-'i 'ukuthola iwindi lolwazi / lokuhlola kuqala. Ukuchofoza ukubuka kuqala kwenza okufanayo.
Icubungula- le ndawo yokubuka konke izilungiselelo ze-watermarking, ukukhulisa usayizi, ukuqamba kabusha njll. Lapha ungasetha ngokushesha ukuthi iyiphi i-watermark ezosetshenziswa kumenyu eyehlayo. Futhi ungavula / ucishe ukukhulisa usayizi, izithonjana, i-EXIF / IPTC / XMP, futhi ungasetha ifomethi yokukhipha nekhwalithi (uma i-jpeg).
Okukhiphayo - chofoza bese ukhetha noma uhudule kufolda lapho amafayela akho asanda kusetshenzwa azohamba khona.
Umphathi we-Watermark- iwindi elingakwesokudla. Yilapho ukhetha khona ama-watermark eyodwa noma amaningi azosetshenziselwa ukubheka isithombe noma izithombe.
Ungasetha ukwakheka kwefolda yokukhipha. Ukushintsha ukwakheka kwefolda kuya kumafolda amancane ePortrait / Landscape kuzohlukanisa zonke izithombe zakho zokufaka zibe amafolda amabili eyodwa equkethe i-Portrait kanti enye eye-Landscape orientation photos.
Ngakwesobunxele senkinobho ethi 'Inqubo' inkinobho yokubuka kuqala ebukeka kanjena.
Leli windi lokubuka kuqala linikeza umbono wendlela i-watermark ezobukeka ngayo esithombeni esikhethiwe. Kungenzeka futhi ukuthi wabelane ngqo kusuka lapha uye ezinkundleni zokuxhumana. Chofoza inkinobho ngakwesokudla phezulu ukuze wabelane ngesithombe esisodwa esibonwe kuqala ku-Facebook, i-imeyili, Imilayezo ye-Twitter, kanye neminye imithombo yezokuxhumana okufanele uyikhethe kuzintandokazi ze-Mac OS System. Chofoza Okuningi ... ukuvula imithombo yezokuxhumana etholakalayo.
a. Umphathi we-Watermark
Umphathi we-Watermark uhlukile kwi-iWatermark. Nakhu lapho ama-watermark angaba khona:
igcinwe futhi yabukwa kuqala.
kukhethwe uku-watermark isithombe.
kuchofozwe kabili ukuhlela.
iqanjwe kabusha kusetshenziswa inkambu engezansi kwesokudla.
kuseshelwe ukusebenzisa inkambu yokusesha phezulu ngakwesokudla.
kukhiyiwe / kuvuliwe okuvikelwe lapho kukhiyiwe awukwazi ukuwahlela noma ukuwasusa.
shumeka i-IPTC / XMP
ithunyelwe futhi yabiwa nge-imeyili noma imithombo yezokuxhumana.
Iwindi leMenenja yeWatermark (lingakwesokudla ngezansi)
Dala- dala i-watermark entsha. Chofoza u- + bese ubona lezi zinhlobo eziningi ze-watermark ongazakha (isithombe-skrini ngezansi).
Susa- khetha i-watermark eyodwa noma ngaphezulu ukuze uwasuse.
Hlela - khetha i-watermark bese uqhafaza le nkinobho noma chofoza kabili ukuhlela kumhleli we-watermark.
Chofoza on the Izinketho Imenyu ngaphansi kwalesi sithonjana segiya
bese ubona le menyu:
Ukubuka kuqala - inikeza ukubuka kuqala kusetshenziswa isithombe esikhethiwe ne-watermark.
Hlela - khetha i-watermark bese uqhafaza ukuhlela noma chofoza kabili i-watermark ukuhlela.
Phinda kabili bese uhlela -akha i-watermark entsha enegama elisha ngokususelwa emsebenzini owedlule.
Hlanganisa- Ihlanganisa ama-watermark ama-2 noma ngaphezulu abe munye.
Yabelana -ama-watermark nge-iW * Cloud, i-airdrop, i-imeyili, imiyalezo kanye / noma i-dropbox.
Thumela- sebenzisa lokhu noma kube lula ukuhudula i-watermark kudeskithophu ukuze wabelane noma ukwenza isipele. Ama-watermark athunyelwe analolu phawu:
Ngenisa- sebenzisa lo myalo noma hudula kuma-watermark athunyelwe, ngesithonjana esingenhla, ukuze ube nawo kwi-Watermark Manager.
Khiya - Chofoza ukhiye omncane ukukhiya / ukuvula i-watermark. Ukukhiya kuyenza ifundwe kuphela futhi ingahleki noma isuswe.
Vula - Chofoza ukhiye omncane ukukhiya / ukuvula i-watermark. Ukukhiya kwenza ifundwe kuphela futhi ingahleleki noma isuswe.
Shumeka noma Susa i-IPTC / XMP kusuka ku-watermark- Shumeka noma susa imininingwane esendaweni ye-IPTC / XMP ku-watermark. Lapho-ke le watermark isetshenziswa ngaphezu kweminye imisebenzi ibuye ishumeke leyo metadata.
Ifomethi Yedethi / Isikhathi- Shintsha amafomethi wedethi / isikhathi akhonjiswe kuMphathi weWatermark.
Ukubukwa Kwekholomu- ikhombisa futhi ifihle izinto ezahlukahlukene zekholomu kuMphathi we-Watermark.
Ukwakha i-watermark entsha chofoza i-watermark entsha kwimenyu yefayela noma chofoza inkinobho + bese uzokubona lokhu.
Ukuchofoza noma yiziphi izinto ezingenhla kuzovula i-Watermark Editor ukudala lolo hlobo lwe-watermark. Kukhona umhleli ohlukile wohlobo ngalunye lwe-watermark. Nakhu ukuthi isihleli se-Text Watermark sibukeka kanjani:
Jwayelekile - kusho ukuthi awukho umphumela.
Inverse- Isusa umbala wesampula lesithombe sombala kusuka kumbala wesampula lesithombe sangemuva, noma ukuhlehla, kuya ngokuthi isiphi isampula esinenani elikhulu lokukhanya. Amanani wesampula yomthombo wesithombe omnyama awakhi shintsho; okumhlophe kuguqula amanani ombala ongemuva.
I-inverse iyinto ewusizo engasetshenziswa ngoba igcina noma umbhalo omuhle utholakala ezithombeni ezinezizinda eziguquguqukayo zethoni. Okumhlophe okusetshenziswa ngokuguquguqukayo kungcono. Lokhu kuyiqiniso ngombhalo nangehluzo. UMnyama ngeke enze lutho. Kungcono ukusebenzisa okumhlophe kumbhalo noma kumidwebo yemodi ephambene.
Usebenzisa Umphumela Oqoshwe Embhalweni ovela kuzilungiselelo ze-Text Watermark
Usebenzisa Umphumela Oqoshwe Ngengqikithi Kumbhalo kusuka kuzilungiselelo ze-Text Watermark
Usebenzisa Umphumela Embossed Embhalweni Ovela Kuzilungiselelo Zombhalo We-Watermark
Isendlalelo se-Emboss kanye nesendlalelo se-Engrave kukhanya ngokusobala okukhombisa isithombe esingezansi. I-Emboss ne-Engrave sebenzisa umbala wombhalo ukugcwalisa ukugcizelela. Kokubili kuyasebenziseka ekubukekeni okucashile.
Njengamanje, unolawulo kuphela kwesinye sezithunzi ezimbili zokwehla komphumela we-emboss / umbhalo.
Umbala wethunzi ongaphandle ulawulwa. Ngaphakathi kwethunzi kulungiswe kokumnyama kwe-Emboss nokumhlophe kwe-Engraved.
QAPHELA: Okwamanje isebenza kuphela ku-Text watermark - hhayi nge-Banner noma umbhalo we-Arc noma i-Graphic okwamanje.
I-Black Shadow - yilokho ongakucabanga.
I-White Shadow - i-ditto
Uhlaka - luveza umbhalo.
Setha isihlungi ukuvumela izinhlobo ezithile zamafayili ukuthi zicutshungulwe.
Ukuhlunga kungavulwa lapha noma ekhasini eliyinhloko. Uma ubeka ifolda kokufakwayo okugcwele lonke uhlobo lwezithombe zefomethi ehlukile kepha ufuna kuphela ukuhambisa amafayili we-.jpg bese ukuhlunga kungakusiza. Hlunga amafayela wokufaka kuzimpawu, amagama angukhiye kanye / noma imethadatha.
3. Ukushintsha usayizi
Shintsha usayizi nesampuli sezithombe ezicutshunguliwe.
Vula ukukhulisa usayizi kuleli noma ekhasini eliyinhloko ukuze ushintshe usayizi noma i-watermark bese ushintsha usayizi. Ukwenza usayizi omusha kuthatha okwangempela bese kukhiqiza ikhophi elilingana nosayizi othile. Ifunda ukukhulisa usayizi ngaphakathi kobubanzi nangaphakathi kokuphakama futhi lokho kusho ukuthi izokhulisa usayizi wesithombe ngaphakathi kwalezo zilinganiso. Ungasebenzisa futhi ukusethwa okusebenzisekayo okungamasayizi asetshenziswa kakhulu ukukhulisa usayizi wakho.
Isetshenziselwa ukuguqula isinqumo esenziwe isampuli. Kusho ukuthini lokhu? Nansi okuhle incazelo.
4. Ukuqamba kabusha
Qamba kabusha zonke izithombe ezicutshunguliwe ngokuzenzakalela.
Vula ukuqamba kabusha lapha noma ekhasini eliyinhloko. Ukuqamba kabusha kwenza amakhophi wamafayela wokufaka bese uwaqamba kabusha noma yini oyinqumile ngokususelwe ekukhetheni kwakho okungenhla. Khetha umaki ofuna ukuwengeza egameni lamafayela noma uthayiphe isiqalo / isijobelelo sakho. Amathegi ayizinto eziguqukayo ezimele lolo lwazi esithombeni. Imodeli izobeka kumodeli yekhamera egameni lefayela elisha. I-Counter izokwenyuka ngo-1 kusithombe ngasinye esetshenzwe.
ICEBISO: Setha ifomethi yesikhathi nosuku kwifomethi ye- Maciya kuLimi nasezifundeni kokuncamelayo kwesistimu bese ucindezela inkinobho ethi Okuthuthukile. Ku-Windows qhafaza Qala imenyu, bese uqhafaza Iphaneli yokulawula bese uchofoza Usuku noma Isikhathi.
ICEBISO: Hudula ungene / ukhiphe amathegi ahlukahlukene (usuku, isikhathi, ikhamera, imodeli, njll.) Bese ubheka ukubuka kuqala ukuze uthole ukunambitheka kokuthi igama lefayela lizobukeka kanjani.
5. Amasethingi wokukhipha
Lapha ungashintsha ifomethi yefayela, ikhwalithi ne-JPEG eqhubekayo. Izilungiselelo eziningi zokuthekelisa ziyatholakala nalapha.
Ifomethi yesithombe: shintsha ifomethi yokukhipha kusuka ku-jpeg, TIFF, Photoshop PSD, PNG, BMP ne-JPEG 2000.
Isandiso sefayela:ungakushintshi lokhu ngaphandle kokuthi wazi ukuthi wenzani futhi unesizathu esithile. Abanye abantu bacele leli khono kepha kusho ukuthi ukuchofoza kabili kusithonjana ngeke kuvule izinhlelo zokusebenza ezincike kuleso sandiso.
Quality: ukushintsha isilayida sekhwalithi kusho ukuthi ushintsha ukucindezelwa kwe-JPEG. Ingasuka ku-100 okusho ukuthi ikhwalithi iyafana ncamashi noma ayilahleki. Ngeshwa, ukusetha ku-100 kukhulisa usayizi wefayela, lokhu kuyiqiniso kuzo zonke izinhlelo zokusebenza. Sincoma ukusethwa okungama-85 okuzenzakalelayo. I-85 inika ikhwalithi enhle nosayizi omncane omncane kunefayela lasekuqaleni. Imininingwane eminingi mayelana nekhwalithi ichazwe kule ndatshana eku-inthanethi:
Enye indatshana enhle ngalokhu:
Kokubili kufanele kukusize uqonde ukuthi kungani sincoma ama-85 kepha kukushiyele kuwe ukuthi ushintshe ngendlela othanda ngayo.
Isandiso Sezinhlamvu Ezincane: kwenza isandiso sibe izinhlamvu ezincane. Yicishe ukuze ikwazi ukugcina ikesi.
Sebenzisa i-JPEG Progressive (kunconyiwe): Lokhu kunconyiwe. Ama-JPEGs aqhubekayo (ama-p-JPEGs) ngokuvamile mancane uma kuqhathaniswa nama-JPEG ayisisekelo, kepha inzuzo yawo enkulu ukuthi avele ngezigaba, anikeze umphumela wokushabalala kwesithombe, ngokufana nama-GIF ahlukaniswe phakathi, ngokungafani nokudweba kusuka phezulu phansi.
Dala izithonjana zezithombe ezicutshunguliwe.
Vula izithonjana lapha noma ekhasini eliyinhloko ukuthola isithonjana sobukhulu obuthile befayela ngalinye elicutshunguliwe. Izithonjana zicutshungulwa ngqo kufolda yokukhipha nganoma yiziphi ezinye izithombe kodwa ngesithupha sesandiso sokuzihlukanisa nezithombe ezijwayelekile.
Khetha “Sebenzisa ifolda ehlukile yezithonjana” uma ufuna ukuba nazo zonke izithonjana ezintsha kufolda entsha kufolda yokukhipha.
Konke okungenhla kwe-EXIF, i-IPTC, ne-XMP yizinhlobo zeMetadata. IWatermark ingenza izinto ezi-3 ngemethadatha.
1. Ingangeza futhi isuse imethadatha esithombeni noma ezithombeni.
2. Ingangeza futhi isuse imethadatha ku-watermark.
3. Imethadatha ingakhonjiswa ku-watermark ebonakalayo.
Okokuqala sizokhuluma ngephuzu 1.
1. Ukungeza nokususa imethadatha esithombeni noma ezithombeni.
IWatermark Pro ingagcina, isuse futhi ishumeke imininingwane ye-meta tag. Futhi lolu lwazi lwe-metatag lungasetshenziselwa izithombe ze-watermark. Imininingwane eminingi nge-EXIF, i-IPTC, ne-XMP lapha.
Gcina imethadatha ekhona - Kuvulwe ngokuzenzakalela. Lokhu kuphinda yonke imininingwane ye-metatag efayilini lokuqala kufayela elikopishiwe.
Faka imethadatha ye-IPTC / XMP enikwe amandla - Lapho lokhu kukhethwa wonke ama-metatags ahloliwe (okwenziwe ngumsebenzisi) engxoxweni engenhla kunezelwa kwikhophi lefayela loqobo.
Imenyu yokudonsela phansi ethi Basic, Professional and Corporate ikuvumela ukuthi ukhethe inani lama-metatags ofuna ukuwahlela futhi uwasebenzise. Zonke izinto ozimikayo zizobhala ngaphezulu imininingwane ekhona kufayela.
ICEBISO: Ngaphansi kwe-TIFF 'iWatermark Pro' ingezwe ngaphansi kweSoftware (ibonwe ngezansi).
Uma udinga ukusesha usebenzisa imethadatha yazo zonke izithombe ezinamanzi lapho kuzosebenza khona.
2. Ukungeza nokususa imethadatha ku-watermark.
Ukuba wusizo kokungeza imethadatha ku-watermark ukuthi ngaso sonke isikhathi lapho ubheka isithombe isithombe singeza isethi ethile yemethadatha ngasikhathi sinye.
IWatermark wuhlelo kuphela esaziyo ngalo olungenza lokhu. Kungani lokhu kuwusizo? Njengomthwebuli zithombe, ungaba ne-watermark ebeka i-watermark ebonakalayo ne-logo yakho ngaphezulu kwesithombe futhi ngasikhathi sinye ifaka imethadatha oyikhethile njenge-copyright yakho, igama lenkampani yakho, i-URL, i-imeyili kanye / noma enye idatha yombhalo oyifunayo.
Ungashumeka kanjani imethadatha ku-watermark.
Okulandelayo, iya kuphaneli ye-EXIF / IPTC / XMP bese ufaka idatha ofuna ukuyifaka ku-watermark.
Bese kuthi kwi-Watermark Manager bese ukhetha imenyu yokudonsela phansi izilungiselelo bese ukhetha Shumeka into.
Lolu lwazi luzovela kukholamu ye-IPTC / XMP kuMphathi weWatermark futhi lubukeke kanjena.
3. Imethadatha ingakhonjiswa ku-watermark ebonakalayo. Lokhu kubizwa nge-Tag.
Ukuze wenze lokhu dala i-watermark yombhalo entsha khetha i-EXIF, i-IPTC ne-XMP metadata eziguquguqukayo njenge-Camera Model njengombhalo we-watermark okuzothi uma icubungulwa ibonise leyo mininingwane njenge-watermark ebonakalayo ezithombeni. Khetha imininingwane yethegi kusuka kule menyu uma wenza i-watermark:
Ukusetha okungadingi ukuguqulwa ngokujwayelekile.
Intuthuko evulekile ngokuzenzakalela- ngemuva kokucutshungulwa kokuqala bese kuvula ingxoxo yenqubekela phambili ngokuzenzekelayo.
Inqubekela phambili Yokuvala Okuzenzakalelayo- ngemuva kokucubungula uma lokhu kuhlolwe ingxoxo yenqubekela phambili ivala ngokuzenzekelayo.
Nweba Icubungula Iwindi- lapho endaweni yokucubungula kuthebhu enkulu ihlala ivulekile.
Khombisa Amafayela Welabhulali avulekile ku-Finder umtapo wezincwadi lapho izibonelo nemidwebo yakho ye-Watermark yesitoko ingangezwa khona.
Izilungiselelo nama-watermark - chofoza le nkinobho ukungenisa izintandokazi kusuka ku-iWatermark yakudala (hhayi i-pro).
Khombisa Amafayela Elabhulali - le indawo yamafayela owakhayo.
Bonisa Ifayela Lokuncamelayo - ivula othole kufayela le- indawo wefayela lokuthandayo bese uliqokomisa.
Bonisa Amafayela Okusekelayo- senza amakhophi woqobo lwakho ukuqinisekisa ukuthi kukhona ikhophi lesibili. Le nkinobho izovula leyo folda ku-Finder.
Setha kabusha konke okuzenzakalelayo - setha kabusha uhlelo lokusebenza kuzilungiselelo ezizenzakalelayo zoqobo. Lokhu kuyasiza kakhulu ukusebenzisa uma uhlangabezana nenkinga.
Umbala Wangemuva Womhleli - lona umbala wesizinda womhleli. Ingasethwa futhi ukusuka kokudonsela phansi kusihleli ekhoneni eliphezulu kwesokudla.
Nweba Imisebenzi Yokucubungula kuthebhu Eyinhloko - ukuba lokhu kuhlolwe kuzokwenza njalo njalo uma uvula i-iWatermark izovulekela kuthebhu enkulu lapho isigaba esiphakathi (imisebenzi yokucubungula) sinwetshiwe.
Sebenzisa i-JPEG Progressive - ungahloli ukusebenzisa i-JPEG eyisisekelo. Ungakushintshi lokhu ngaphandle kokuthi wazi ukuthi wenzani.
Ngezithombe Ngaphandle Kwephrofayili Eshumekiwe - kukuvumela ukuthi ukhethe amaphrofayili ahlukahlukene eza kwi-Mac noma iWindows noma alayishwe ku-Nikon, Canon noma kwenye isoftware. Okuningi ngamaphrofayili ombala we-ICC lapha.
Dala Ifayela Lomlando- kudingeka kuphela uma sikucela ukuthi uyivule ngokusekelwa kwezobuchwepheshe noma ufuna ilog yakho konke ukusebenza.
Bonisa Ifayela Lomlando - lokhu kukhombisa lelo fayela le-log.
Ngenisa ama-iWatermark amadala - izongenisa ama-watermark amadala e-iWatermark. Ngaso sonke isikhathi lapho inkinobho ishaywa izongenisa wonke ama-watermark amadala ngakho-ke kungcono kakhulu ukuyishaya kanye kuphela ngaphandle kokuthi ufuna ukuba nezimpinda zawo wonke ama-watermark amadala.
Imithi- kudingeka kuphela lapho kucelwa ukusekelwa kwethu kobuchwepheshe. Lolu lwazi lusiza abahleli bethu.
eyinqolobane isetshenziselwa ukwenza isipele nokwabelana ngama-watermark.
Isithonjana seDropbox - Chofoza lapha ukuya kusayithi leDropbox bese udala indawo yokugcina yamahhala engu-2 GB.
Ukulayishwa kweDropbox- Uma usunayo i-akhawunti yeDropbox chofoza le nkinobho ongayilayisha. Kuhle ukwenza isipele ama-watermark akho ku-inthanethi. Ibuye ikuvumele ukuthi uvumelanise ama-watermark nezilungiselelo zakho namanye amakhompyutha.
Ukulanda kweDropbox - landa ama-watermark nezilungiselelo zakho kusuka ku-Dropbox uye kwikhompyutha yakho.
Susa i-Dropbox- isusa ama-watermark akho nezilungiselelo ku-Dropbox.
IsithombeNotary- le bekuyinsizakalo esiyenzele ukusekela ama-watermark. Kwakuyisevisi yamafu. Ayisatholakali. Ukuyifaka esikhundleni sayo sivumela abasebenzisi ukuthi bathumele ama-watermark futhi basebenzise amasevisi wabo wefu.
Le thebhu iyindawo yokufaka imininingwane yakho yokubhalisa uma uthenge i-iWatermark Pro kithi hhayi i-Apple App Store. Nakhu lapho ubeka khona imininingwane yokubhalisa esiyithumele ngokuzenzakalela lapho uthenga iWatermark Pro. Uma usufake imininingwane bese ucindezela inkinobho yokufaka isicelo uthola ibhokisi elithi usubhalisiwe manje.
Usebenzisa uhlelo lokusebenza lwe-Apple's Photo nge-iWatermark Pro Mac
Izithombe zisebenza ne-iWatermark Pro njengezinhlelo zokusebenza ezizimele. I-iWatermark izosebenza ngaphakathi kwezithombe njenge-plugin kungekudala.
Ukufaka i-Watermark kusuka ku-Windows Explorer
Kusukela kukhishwe i-2.0.1 yenguqulo yamawindows, ungafaka i-watermark kusuka ngaphakathi kwe-windows Explorer. Lesi sici sibizwa ngokuthi yi-shell extension. Qhafaza kwesokudla kufayela lesithombe (i-JPEG, i-PNG, i-TIFF, i-BMP, i-PSD) bese ukhetha i-'Watermark ene-iWatermark Pro 'nakwimenyu yokulandelana, enye yama-watermark asohlwini.
Isithombe manje sesiphekiwe. Kuyashesha futhi kulula.
Qaphela: ifomethi yefayela izohlala injalo kepha ungalawula ikhwalithi yesithombe kusuka kuphaneli enkulu yohlelo. Ukulinganiselwa kwesandiso seShell:
1. Kungasetshenziswa i-watermark eyodwa ngasikhathi.
2. Isithonjana ngeke senziwe.
3. Uma ifayili lesithombe likhiyiwe ngolunye uhlelo lokusebenza ngeke lisebenze.
4. Ifayela lokufundwa kuphela lizokhangiswa ngomzimba kodwa lapho-ke ngeke lisakwazi ukufundwa kuphela kepha liyabhalwa.
Imenyu ye-iWatermark Pro
Ikuvumela ukuthi uhlole izinhlobo ezintsha ze-iWatermark Pro. Sincoma ukuthi ngaso sonke isikhathi sibe nenguqulo yakamuva ngoba simatasa silungisa izimbungulu futhi sengeza izici ezintsha.
Sebenzisa isifaki ukufaka wonke amafonti asetshenziswe kuzinguqulo ze-iPhone / iPad ne-Android zeWatermark kanye namafonti amaningi weGoogle. Ukuba namafonti afanayo kumakhompyutha ahlukile nangezindlela ezahlukahlukene ze-OS zokuthi ama-watermark athunyelwe angabiwa futhi abukeke efanayo. Lawa mafonti angeziwe asiza ukuhambisana kwe-watermark ngoba manje sesinikeza ukwabelana nge-watermarking phakathi kwe-Mac, Windows ne-iOS nezinguqulo ze-Android zeWatermark maduzane. Futhi iqoqo elihle kakhulu lamafonti ongawasebenzisa kuma-watermark.
Isifaki sefonti ne-plugin sithi lapha. Ama-plugins awasanconywa kepha asesifakeleni sabantu abafisa ukuqhubeka nokusebenzisa i-Aperture ne-iPhoto kuzinguqulo ezindala ze-Mac OS.
Uma unamafayela amaningi ama-watermark akhishwe kufolda ungachofoza eyodwa bese ushaya isikhala somyalo we-hotkey osheshayo ukukhombisa ibhokisi elingenhla elinolwazi ku-watermark.
I-Watermark entsha- Dala i-watermark entsha kusihleli. Yenza okufanayo nokushaya inkinobho ethi +.
Hlela i-Watermark- Ingabe into efanayo njengokushaya inkinobho Hlela kuphaneli enkulu.
Gcina i-Watermark - Ingabe into efanayo njengokushaya inkinobho Yokulondoloza kusihleli seWatermark.
Dlulisa amehlo ku-Media- Ukulanda i-iMedia Browser (Mac kuphela) ongayikhetha neyamahhala ekuvumela ukuthi ubambe kalula izithombe ezivela ezindaweni ezahlukahlukene. Uma isilandiwe bese isebenza ngokushesha ukuvumela ukukhethwa kwezithombe.
Khombisa ifolda eyisipele - ibonisa indawo ekutholeni ifolda eyisipele yamafayela wokufaka woqobo.
Thumela i-Watermark - Ithekelisa ifayela le-watermark lamanje elinesithonjana esingezansi.
I-watermark ethunyelwa ngaphandle iqukethe umbhalo nemidwebo kepha hhayi amafonti. Ungabe usungenisa le iWatermark Pro kwenye ikhompyutha. Kuyasiza kakhulu ukwabelana nge-watermark yakho nabanye.
Ngenisa i-Watermark - Ingenisa lawo mafayili we-watermark akhishwa kwamanye amazwe.
Setha amafolda- Lokhu kwenza ukusethwa okufanayo kokufaka / kokukhipha / izithonjana ongazenza kuphaneli enkulu.
Amasethingi-Khombisa izibambo zezinto-
Isithombe sokufaka esilandelayo -
Isithombe Sokufaka Esedlule -
Into elandelayo ye-Watermark -
Into yangaphambilini ye-Watermark -
Nciphisa- Sesha imenyu nezinsizakusebenza ze-Apple. Ayiseshi ibhukwana.
Zoom - Ivula ibhukwana eliku-inthanethi okulo njengamanje 🙂
Khombisa ukuqhubeka kokukhipha - Uma uneziphakamiso / izimbungulu ungazibika lapha. Sibheke Imininingwane Yesithombe - Ivula ingxoxo yolwazi ye-
Letha Konke Phambili - Wonke amawindi e-iWatermark Pro alethwa ngaphambili.
Windows - Ibonisa amawindi avulekile eWatermark Pro.
Ukucinga- Sesha imenyu nezinsizakusebenza ze-Apple. Ayiseshi ibhukwana.
iWatermark Pro Usizo - Ivula ibhukwana eliku-inthanethi okulo njengamanje 🙂
Thumela impendulo- Uma uneziphakamiso / izimbungulu ungazibika lapha. Siyabheka kulokhu kepha kungenzeka singaphenduli.
A: Akunandaba ukuthi yini inkinga sicela ulandele lezi zinyathelo:
OKOKUQALA: Iya kuthebhu ethuthukisiwe bese ushaya inkinobho ethi 'Setha kabusha konke okuzenzakalelayo'. Lokhu kuvame ukunakekela inkinga okuwukuthi abantu bayakhohlwa ukuthi benze izinguquko kuzilungiselelo ezahlukahlukene. Bese uzama futhi.
UMZUZWANA: Vula uhlelo ngaphansi kwemenyu yeWatermark Pro entweni ethi Mayelana nemenyu khetha lokho ukubona ukuthi usebenzisa yiphi inguqulo nokuthi ingeyakamuva. Qiniseka ukuthi une-iWatermark Pro kufolda yakho yohlelo lokusebenza hhayi i-iWatermark yakudala. Susa zonke izinhlobo ezindala. Uma kudingeka landa inguqulo yakamuva ye-iWatermark Pro kusuka kusayithi lethu.
OWESITHATHU: Qiniseka ukuthi ubhalisile. Bona ngenhla.
LESINE: Qala elula. Zama i-watermark elula. Hudula isithombe esisodwa kuthileyi wokufaka nefolda engenalutho kuthileyi wokukhipha. Khetha okukodwa kwama-watermark wedemo kumenyu yokudonsela phansi. Inqubo ye-Hit bese ihlola ifolda yokukhipha ukuze ubheke ukuthi isithombe sinamanzi.
Uma usenenkinga bese usithumela i-imeyili bese usithumela lolu lwazi:
1. Sazise uma ngabe ulandele inqubo engenhla.
2. Sithumele isithombe osisebenzisayo. Futhi, thekelisa futhi uthumele i-watermark oyisebenzisayo.
3. Sithumele i-log log ngemuva kokubangela inkinga ku-iWatermark. Ukwenza lokhu vula i-log log ishaye inkinobho kuthebhu ethuthukisiwe ethi 'open log log log'. Sula ilogi yekhonsoli bese uqalisa i-iWatermark futhi ukudala inkinga bese ukopisha imininingwane evelayo kwilogi yekhonsoli bese usithumela i-imeyili.
Q: Ngingenisa kanjani ama-watermark ami amadala e-iWatermark?
A: Iya kuthebhu ethuthukisiwe bese ucindezela inkinobho yokungenisa. Yishaye kanye kuphela noma uzothola izimpinda.
QNgiyiqamba kanjani kabusha i-Watermark?
A: Kumenenja ye-watermark, chofoza igama le-watermark ukuyishintsha. Ungakhetha futhi i-watermark bese uyivula kusihleli. Ngezansi kwesokudla shintsha igama bese ushaya ukulondoloza.
Q: Ama-watermark wesibonelo sakho mahle kakhulu ngizihlela kanjani mina?
A: Vele ukhethe bese uchofoza inkinobho yokuhlela. Izokwakha entsha enesihloko esifanayo ngokufakwa kwekhophi yegama ekugcineni. Yazi iqiniso lokuthi abanye bangaba nemibhalo emhlophe engemuva elimhlophe okungenzeka ingabonakali. Vele uhudule umbhalo ukuze uwukhethe bese uwushintshela kunoma yini oyifunayo. Imvamisa kuma-watermark ethu wedemo, sisebenzisa umaki odonsa oxhumana naye omkhulu (imvamisa wena) encwadini yamakheli.
QNgingangeza i-watermark engaphezu kweyodwa ngesikhathi esithombeni?
A: Yebo, khetha nje ama-watermark kumphathi we-watermark ngaphambi kokucindezela inkinobho yenqubo.
Q: Ngiyakha kanjani i-watermark yesiginesha nesiginesha yami yangempela?
AKu-Mac ungalandela le miyalo bese ukopisha leso siginesha.png ku-watermark entsha ye-Graphic ongayisebenzisa noma nini lapho uyidinga.
Q: Ngiyakha kanjani i-watermark enesizinda esibonakalayo njengamasiginesha wedemo owafakayo?
A: Ihluzo layo elilula kakhulu nanoma iliphi eliphakathi eliphakathi lizokwazi ukuthi kanjani kepha noma ngubani angakwenza. Nazi izifundo ezimbalwa, Isifundo se-1 futhi Isifundo se-2.
Q: Nginenkinga yokubhalisa. Kumele ngenzeni?
A: Uma unenkinga yokubhalisa landela lezi zinyathelo:
1. Bheka ifayela le- Mac or Windows ikhasi lesicelo kusayithi lethu ukuze uqiniseke ukuthi unenguqulo yakamuva futhi uqiniseke ukuthi likufolda yakho yohlelo lokusebenza.
2. Susa zonke izinhlobo ezindala.
3. Ukubhalisa uhlelo lokusebenza usebenzisa ukhiye welayisense. Qiniseka ukuthi ulandela izinkomba ku-imeyili oyithunyelwe ngemuva kokuthenga uhlelo lokusebenza.
4. Uma uthola ibhokisi elithi 'Awubhalisiwe' qiniseka ukuthi ukopisha futhi unamathisela idatha yakho yokubhalisa kusuka ku-imeyili yokubhalisa esiyithumele.
5. Ngemuva kokuchofoza inkinobho yokufaka isicelo sokubhalisa kufanele ubone lokhu (ngezansi). Ngaphandle kwalokho xhumana nathi uma unemibuzo.
Q: Ingabe ikhona indlela yokukhipha izithombe zosayizi ogcwele nge-watermark kanye nezithonjana zokukhipha kepha nge-NO watermark?
A: Yebo, ngokusebenzisa I-AppleScript.Thepha lesi sixhumanisi ukuya esahlukweni se-Apple Script sale manuwali ufunde impendulo yombuzo ongenhla. I-AppleScript ingumngani wakho uma ufuna ukusebenzisa i-iWatermark Pro ngezindlela ezintsha.
Q: Ingabe iDigimarc akuyona indlela ebucayi yokuthi abathwebuli zithombe bangempela benze ama-watermark ezithombeni?
A: Izinkulungwane eziningi zabathwebuli bezithombe abangochwepheshe zisebenzisa iWatermark. Isizathu esenza ukuthi senze iWatermark kungenxa yokuthi besinesidingo sokubuka izithombe zethu (iningi lethu singabathwebuli zithombe) futhi besifuna okuthile okusebenze kalula, kushibhile futhi ngempumelelo. Siphenye iDigimarc nezinye izindlela eziningi ezishumeka i-watermark esithombeni. Sithole ukuthi iDigimarc ibiza amakhulu amadola ngonyaka (futhi bayakhokhisa ngokususelwa kwinani lezithombe) futhi inqubo yeDigimarc ayisiyiphutha noma iyasebenza ngempela. Uma ushumeka idatha yakho ngandlela thile engabonakali njengeDigimarc abantu ababoni. Kukhona isoftware eyenza i-watermarking ebonakalayo, njenge-iWatermark, nesoftware eyenza i-watermarking efihliwe, njengeDigimarc. Ithi une-iPhone bese uyilahlekela epaki, maningi amathuba okuthi uyithole uma ibhalwe igama nefoni yakho (iWatermark) uma imininingwane ethile ifihliwe / ibethelwe ku-flash drive yayo (Digimarc).
Ngokubheka lawa maqiniso sanquma zisuka nje ukuthi iWatermark kufanele iqonde, ingabizi, isebenzise ukubonwa kanye nokufihla i-watermark. Indlela ephumelela kunazo zonke esinqume ukuyenza kwakungukuthi senze isoftware ekwazi ukucubungula izinkulungwane zezithombe bese ifaka i-watermark enhle (ilogo, isiginesha, i-copyright, noma yini). Lokhu kwazisa abantu ngqo phambili nangaphandle obala bobunikazi bakho.
Bangakwazi ukuyisusa? Yebo, kepha okufanayo kuyiDigimarc. Uma ugcina isithombe ku-jpg siyacindezelwa (i-jpg yifomethi ecindezelweyo) amaphikseli wonke ayanyakaziswa azungezwe futhi ahlelwe kabusha ngaleyo ndlela alahlekelwe yimininingwane ye-Digimarc efakiwe Ngeshwa sisesekuqaleni kwenkathi yedijithali futhi ilungelo lobunikazi lobunikazi aluphelele. Le yinkinga yabaculi, abenzi bama-movie, abathwebuli bezithombe nabathuthukisi be-software. Ngisanda kwenza i-google ngale ndaba futhi ngathola lesi sixhumanisi esithakazelisayo ngumthwebuli wezithombe olisho kahle leli cala.
IDigimarc ifana nokucabanga ukuthi uvikela umhlaba wakho ngokumbela uphawu olungelona ukungena ngaphansi kwawo. Akekho ozoyibona futhi bazocabanga umhlaba wayo womphakathi nokuthi bangenza abakuthandayo. Akusebenzi kahle. Iqiniso ngukuthi ukukwenza kucace ngokuphelele ukuthi enye impahla ngeyakho kuseyindlela engcono kakhulu yokuvikela nokuvikela kokuqala. yingakho sidale iWatermark. I-iWatermark bekuyindlela ekhethwayo yokusebenzisa i-watermarking ebonakalayo hhayi i-watermarking efihliwe. Siphinde safuna ukuhlinzeka ngendlela elula ukuyisebenzisa, esebenzayo nengabizi wonke umuntu angayisebenzisa futhi ayiqonde.
Ekugcineni, noma ngabe iWatermark iba yindlela yakho yokuqala yokuvikela (yokuphathwa kwamalungelo edijithali) asikho isizathu sokuthi kungani ungeke futhi usebenzise ezinye izindlela ezinjengeDigimarc.
Q: Kungani kufanele ngibukele izithombe engizibeke ku-Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, njll.
A: Umbuzo omuhle kakhulu! Ngoba zonke lezo zinsizakalo zisusa imethadatha yakho futhi akukho lutho olubopha leso sithombe kuwe. Abantu bangavele bahudulele isithombe sakho kudeskithophu yabo bese babelana nabanye kuze kungabikho ukuxhumana kuwe futhi kungabikho lwazi efayeleni elithi ulidalile noma ungumnikazi walo. I-watermark iqinisekisa ukuthi wonke umuntu ucacelwa iqiniso lokuthi isithombe siyi-IP yakho (impahla enobuhlakani bengqondo). Awusoze wazi ukuthi isithombe osithathile sizoqala ukusabalala.
Q: Ngiwasebenzisa kanjani amafonti onawo kunguqulo ye-iOS yeWatermark?
A: Manje, indlela elula ukumane uye kwisifaki sama-plugins we-iPhoto ne-Aperture bese ufaka lawo ma-plugins namafonti ngasikhathi sinye.
Futhi, lawa ngamafonti atholakala kuzinguqulo zohlelo lwe-iOS njenge-iOS 5, iOS 6 ne-iOS 7:
Q: Ngithole i-watermark kumngani. Lapho ngiyingenisa, ibingafani ncamashi neyabo?
A: Sisebenze kanzima ukwenza isiqiniseko sokuthi ungathumela futhi wabelane ngama-watermark kwamanye amakhompyutha futhi ubukeke ufana kodwa umehluko ungadalwa yilezi zinto:
1. Izinhlelo zokusebenza ezehlukene zenza izinto ngokuhluka kancane ngemidwebo, umbala, isibonisi, njll.
2. Amafonti ahlukene. Uma ungenayo ifonti efanayo ngqo njengoba benayo lapho kuzoba nomehluko ekubukekeni. Kungaba ifonti efanayo kepha inguqulo ehlukile.
1. thola umngani wakho akuthumele ifonti ngqo.
2. thola mahhala noma uthenge ifonti efanayo online.
3. qiniseka ukuthi ulande isifaki sefonti ne-plugin, wafaka amafonti kulokho ngoba amaningi amafonti angeziwe asetshenziswe ku-iOS naku-Android.
Q: Uma ngiphendula umbhalo wami we-watermark 90 noma 270 degrees, uba mncane kakhulu. Kufana nobubanzi / amaphesenti wamaphesenti awalandeli i-angle yokujikeleza.
A: Lokhu kungumphumela wendlela oyikhethayo yokukala. Uma wenza i-watermark kusihleli se-watermark ngokuzenzakalela isethwe ku-Horizontal. Uma ukhetha i-Horizontal noma i-Vertical izokwenza lokho kweqa uzungeze, kuncane futhi kukhule, kepha uma ukhetha ukungavuleki kuzobe kuziphatha ngendlela ejwayelekile. Kubalulekile ukuqonda ukuhwebelana kokusebenzisa ukukala okungavaliwe, okuvundlile nokuqondile Kuchazwa lawo ma-tradeoffs nokuthi kungani iWatermark isebenza ngendlela esebenza ngayo lapha.
Q: Uma ngisebenzisa umaki ngaphakathi kwe-watermark angiboni noma iyiphi i-watermark evela?
A: Udinga ukuba nezithombe ezinalo thegi ezishumekwe kuzo noma akukho okuzobonakala esithombeni. Enye indlela ezosebenza ukucindezela umaki kulokho ungene endaweni ye-EXIF / IPTC / XMP ye-iWatermark.
Q: Ngisisebenzisa kanjani isithombe sami sesiphequluli nge-iWatermark?
A: iPhoto, Imbobo, Lightroom, Xee, iMedia, ACDSee, iView, i-Picasa, i-QPict nezinye iziphequluli zesithombe konke kungasetshenziswa ne-iWatermark Pro.
Hudula noma khetha isithombe noma ifolda ku-iWatermark Pro bese utermark njengokujwayelekile.
QNgabe iWatermark Pro isebenza nge-Aperture, iPhoto, Lightroom nezinye iziphequluli zezithombe?
A: Yebo kuyasebenza. Kuzo zonke lezi zinhlelo zokusebenza nezinye, isiphequluli se-iMedia sivumela ukufinyelela okusheshayo kokuhudula bese uphonsa kusuka kusiphequluli sesithombe, i-iPhoto noma umtapo wolwazi we-Aperture kuya ku-iWatermark Pro. Vele ulande isiphequluli se-iMedia bese ufaka. Bese usebenzisa imenyu ye-iWatermark Pro File ukufinyelela kwisiphequluli se-iMedia.
Q: IWatermark Pro ishesha kakhulu kuneWatermark kodwa kufanele ngicubungule izinkulungwane zezithombe. Ngabe unazo izeluleko zokusebenzisa ijubane ngokushesha?
A: Vala iwindi lolwazi uma livulekile. Vala ifasitelana lokubuka kuqala uma livulekile. Okokufaka kudrayivu eyodwa nokukhipha kokunye. Amaprosesa amaningi futhi asheshayo, imemori eyengeziwe nokushayela okusheshayo njenge-flash drive noma i-RAID yonke usizo.
Q: Ingabe ikhona iWatermark Pro ye-Windows?
A: Yebo, kune-iiWatermark Pro ye-Windows. Kukhona futhi eyodwa ye-Mac. Kukhona iWatermark + ye-iOS ne-Android.
QAma-watermark agcinwa endaweni elandelayo ku-Windows
A: Le yindlela eya kwimininingwane ye-watermark:
C: \_ Abasebenzisi \_ UserProfileName \_ AppData \_ Ukuzula \_ iWatermark Pro \_ ama-watermark
Q: Agcinwa kuphi wonke amafayela athandwayo?
A: Indlela elula yokubathola ukuthola ukuthepha ithebhu ethuthukisiwe ewindini elikhulu bese inkinobho yeLabhulali ukubona zonke izilungiselelo ezigcinwe ku-iWatermark Pro.
noma uye lapha:
- Khombisa iLabhulali khombisa le folda:
Ukuthinta inkinobho ethi 'Khombisa Isipele' kukusa lapha:
C: \_ Abasebenzisi \_ [umsebenzisi] \_ AppData \_ Local \_ iWatermark Pro \_
Le folda iqukethe amafayela e-Backup -
Amafayela we-Log - Show Console Log inkinobho vula le folda.
Q: Kungani izinto ezisesithombeni esinamanzi zinemibala ehlukile kunezinto ezisesithombeni sokuqala?
A: Lokhu kungabangelwa inkinga ngamaPhrofayili Wemibala. Amaphrofayili Wemibala ayinkimbinkimbi impela. Ku-Mac, Amaphrofayili Wombala imvamisa ayinkinga ngaphandle kokuthi uzama ukuthola lokho okubonayo kumonitha ukuze kufane nalokho okuphrintayo. Ku-Windows, inkinga ingavela kaningi.
Iya kumenyu yokuqala> Iphaneli yokulawula> Ukuphathwa kombala.
Chofoza ithebhu yamadivayisi uma ingakhethiwe.
Ukusuka ku-pop-up yedivayisi, khetha ukuqapha kwakho. Uma une-monitor engaphezu kwe-1 exhunywe, ukucindezela inkinobho ethi Khomba iziqaphi kuzobonisa inombolo enkulu esibukweni ukuze ihlonzwe.
Bheka ibhokisi elithi 'Sebenzisa izilungiselelo zami zale divayisi'.
Bhala phansi iphrofayili ekhethiwe njengamanje, emakwe njenge (yedifolthi). Uma ingekho iphrofayela ekhona, ungeqa lesi sinyathelo.
Chofoza inkinobho yokwengeza.
Engxoxweni ye-Associate Colour, khetha i-sRGB IE61966-2.1 (sRGB Colour Space Profile.icm) bese ucindezela u-OK.
Emuva engxoxweni yokuphathwa kombala, khetha iphrofayili ye-sRGB bese uqhafaza Setha njengephrofayili ezenzakalelayo, bese uvale ibhokisi.
I-Mac OS X
Iya kokuncamelayo kwesistimu> Khombisa.
Khetha ithebhu yombala.
Cindezela inkinobho yokulinganisa bese ulandela imiyalo.
Vula Izinketho Zesazi bese ulinganisa i-gamma
Nalu olunye ulwazi kumaphrofayili wombala.
Izixhumanisi zomsebenzisi wokugcina ze-Adobe:
Q: Uma isithombe se-CMYK sikwinqwaba yenqubo, ingabe sizoshintsha imodi yombala ibe yi-RGB?
A: Yebo kuzokwenzeka, i-iWatermark okwamanje isebenza nge-RGB kuphela, ngakho-ke izovula isithombe se-CMYK, kepha iyiguqule ekuqhubekeni.
Q: Yimaphi amafomethi weRAW afundwa yiWatermark Pro?
A: I-Apple iyaqhubeka nokukhipha izibuyekezo ku-Mac OS ukusekela kangcono amafomethi e-RAW ahlukahlukene, Lapho iMac OS ivuselelwa iWatermark isebenzisa ngokushesha lokhu kuthuthukiswa. Imininingwane engaphezulu ikule Apple Apple Note: http://support.apple.com/kb/HT4757
Abasebenzisi beWindows bangathola iMicrosoft Codec Pack yeMicrosoft bese beyifaka.
Q: Ngingayisebenzisa eminye yemethadatha ukwenza i-watermark ifayili?
A: Yebo, sincoma ukuthi sikuzame ngoba kungasiza kakhulu. Iya kumenyu yokudonsela phansi ye-'Engeza i-watermark yombhalo 'khetha u-'Metadata' ukhethe kokukodwa kwe-EXIF, i-IPTC noma okunye ukukhetha futhi kuzokwehla kokuguquguqukayo kombhalo okuzofaka idatha efanele lapho kusetshenzwa.
Q: Yini i-XMP? Yini i-IPTC? Yini i-EXIF?
A: Bheka i- isigaba samagama.
Q: Ngingayisebenzisa iWatermark kumakhompyutha ama-2?
A: Yebo, uma kunguwe wedwa umsebenzisi. Uma wena nomunye umuntu nizosebenzisa iWatermark kuyo yomibili imishini lokho ilayisense idinga ukuthenga enye ikhophi.
Q: Ifayela elikhulu kangakanani i-iWatermark Pro watermark?
A: Sisebenzisa i-API ye-Apple (ikhodi yabo) ukusebenza ne-TIFF, i-JPEG, njll. Yini usayizi ongaba khona kuya ngohlobo lwefayela. Usayizi omkhulu nawo uzoncika enanini le-RAM emshinini.
Kwi-TIFF futhi kuzoncika ekutheni ngabe ifayili le-TIFF lijwayelekile noma licindezelwe. Umkhawulo we-TIFF ungusayizi we-4GB lapho ugcinwa kudiski. Izinketho zokucindezela zingasiza. UMA usayizi wefayela> 4 GB ne-TIF uzohluleka. I-JPEG / JFIF isekela ubukhulu besithombe obungu-65,535 × 65,535 wamaphikseli, yingakho-ke kufika kuma-gigapixel ama-4 ngesilinganiso esingu-1: 1. Uhlelo lokusebenza lwe-Apple's Preview lunomkhawulo wokukhipha ama-JPEG's angama-30,000 × 30,000.
Ngamafayela amakhulu kakhulu lawa amathiphu amahle okusheshisa i-iWatermark
1. Ungakhombisi ibhokisi lengxoxo.
2. Vala iwindi lokubuka kuqala uma livulekile.
3.Vala ukubuka kuqala kumphathi weWatermark ngokuhudulela isihlukanisi phezulu.
Q: Ngisebenzisa i-Lightroom. Kungani kufanele ngisebenzise iWatermark?
A: I-iWatermark ihlinzeka ngamathuluzi okubukisa awatholakali eLightroom. Isibonelo, i-watermark yombhalo e-Lightroom ngosayizi owodwa ongaguquki ngamaphikseli ukuze i-watermark yehluke ngokuya ngesinqumo sezithombe ezenziwa i-watermark. Ngenkathi i-iWatermark inama-watermark wombhalo azikala ngokulingana ngokuya ngesisombululo noma i-portrait / lanscape. I-Lightroom isebenzisa amaphikseli ukuthola indawo ye-watermark kanti i-iWatermark ibeka i-watermark ngokulingana ngokusekelwe ku-esolution noma ku-portrait / lanscape. Lokho kusho ukuthi uma uthengisa iqoqo lezithombe zezinqumo ezihlukile kanye / noma i-landscape noma i-portrait orientation i-iWatermark ingaba ne-watermark egcina ukubukeka / ubunikazi obufanayo kuzo zonke lezi zinhlobo zezithombe. I-iWatermark nayo inezinketho zokungalingisi. Lokhu ngumehluko emi-2 emikhulu.
Q: Ku-Mac akhona ama-plugins, amafayili wokuncamelayo nefolda equkethe ama-watermark atholakala?
A: Izindawo zawo wonke amafayela eWatermark.
Chofoza kuthebhu ethuthukisiwe bese uchofoza inkinobho ethi 'Khombisa amafayela womtapo wolwazi' azobonisa i-watermark namanye amafayela wehluzo kusitholi.
Chofoza kuthebhu ethuthukisiwe bese uchofoza noma iyiphi inkinobho ethi 'Khombisa ifayili lokuncamelayo' elizokhombisa ifayela lokuncamelayo kusitholi. Uma ufuna ukuthola umtapo wezincwadi ongezansi kwakho khumbula ukuthi uchofoze kokukhetha kukho kwimenyu ye-Go Finder iveze Umtapo Wezincwadi. I-Apple ifihla ifolda yeLabhulali ekusetshenzisweni okujwayelekile.
MacI-HD: Abasebenzisi: Igama Lakho: Umtapo Wezincwadi: Iziqukathi: com.plumamazing.iwatermarkpro: Idatha: Umtapo Wezincwadi: Okuncamelayo: com.plumamazing.iwatermarkpro.plist
Ngenguqulo endala ye-iWatermark Pro <1.72
Photo Plugin efakwe ku:
~ / Library / Support Support / iPhoto / Plugins /
I-plugin ye-QuickLook ifakiwe ku:
/ Ilabhulali / i-QuickLook (isb. Yabo bonke abasebenzisi - lokhu kudinga i-akhawunti yomlawuli).
Ama-plugins okuvula afakwe ku:
~ / Library / Support Support / Aperture / Plug-Ins / Export / ~
~ / Library / Support Support / Aperture / Plug-Ins / Umhleli /
Ukulanda isifaki sama-plugins kwimenyu ye-iWatermark Pro khetha, 'Landa isifaki ukufaka ama-iPhoto & Aperture Plugins namafonti'. Noma ungalanda isifaki lapha:
Amafolda alandelayo kufanele abe khona vele kepha kufanele abekhona ukuze isifaki sibeke ama-plugins we-iPhoto ne-Aperture:
~ / Library / Support Support / Aperture / Plug-Ins / Isihleli
~ / Library / Support Support / Aperture / plug-Ins / Export
~ / Library / Support Support / iPhoto / Ama-plugins
Uma isifaki sinenkinga hlola ukuthi asikhona yini. Bamba ukhiye wokukhetha phansi bese ukhetha imenyu ye-Go ukufinyelela kufolda yelabhulali. Ngemuva kwalokho hlola ifolda yoSizo Lokusebenza futhi uma bengekho ungazidala ngokwenza. Noma uma ujwayelene neTheminali bese ukopisha bese unamathisela okulandelayo ku-Terminal:
mkdir -p ~ / Library / Support Support / Aperture / Plug-Ins / Editor
mkdir -p ~ / Library / Support Support / Aperture / Plug-Ins / Export
mkdir -p ~ / Library / Support Support / iPhoto / Plugins
Kwirekhodi lawa ama-plugins ahamba kulawo mafolda:
I-iWatermarkAperture Export.ApertureExport iya kufolda ethi Export
IWatermarkAperture Stomper.ApertureEdit ingena kufolda yoMhleli
iWaterMarkFileExporter.iPhotoExporter ingena kufolda ye-iPhoto / Plugins
Q: Ngiwakhipha kanjani ama-plugins.
A: Ukukhipha ama-plugins e-iWatermark ku-iPhoto nakuMbobo
1. Yeka isicelo se-iPhoto uma sisebenza.
2. Ku-Finder khetha u-Go Imenyu -> Iya kufolda yohlobo ngo:
Iwindi elisha le-Finder lizovula likukhombise ifolda ye-plugin.
3. Susa i- "iWaterMarkFileExporter.iPhotoExporter" kufolda ye-iPhoto plugin.
4. Qalisa iPhoto. Ukuhlola khetha isithombe ongasithumela. Bese ukhetha:
i-plugin ye-iWatermark kufanele ingasekho ngakho ngeke usakwazi ukukhetha i-plugin.
1. Yeka uhlelo lokuvula uma lisebenza.
2.Kusitholi khetha u-Go Imenyu -> Iya kufolda yohlobo ngo: ~ / Library / Support Support / Aperture / Plug-Ins / Editor
3. Susa “iWatermark Stomper.ApertureEdit”
4. Ku-Finder khetha u-Go Imenyu -> Iya kufolda yohlobo ngo: ~ / Library / Support Support / Aperture / Plug-Ins / Export
5. susa i- "iWatermarkApertures.ApertureExport"
Thumela ama-watermark ne-imeyili noma uwafake kumafolda e-PhotoNotary, Dropbox, Google Drive noma e-SkyDrive ukuze uwasebenzise kwamanye amakhompyutha. Ingasetshenziswa phakathi kwama-Macs manje kwamanye amakhompyutha namadivayisi eselula.
I-Dropbox - Thola i-akhawunti yamahhala ene-2 ​​GB yesikhala ngokuchofoza lapha.
I-Google Drayivu - Thola i-akhawunti lapha 5 GB mahhala. Sibutsetelo se-Google Drayivu lapha.
I-OneDrive - Thola i-akhawunti lapha futhi 7 GB mahhala.
Ku-Mac uma nje umuntu othile ethumela (nge-imeyili noma enye yezinsizakalo ezingenhla) ukuthumelela i-watermark ethunyelwa nje kabili ukuyivula / ukuyifaka enguqulweni yakho ye-iWatermark Pro for Mac.
I-watermark ethunyelwa ngaphandle inesithonjana esibukeka kanjena.
I-Digital Watermarking - inqubo yokushumeka imininingwane efayeleni lemidiya noma elingasetshenziswa ukuqinisekisa ubuqiniso bayo noma ubunikazi babanikazi bayo.
watermark - i-watermark yedijithali ebonakalayo kanye / noma engabonakali ekhomba umnikazi wento ethile yemidiya yedijithali.
I-watermark edijithali ebonakalayo-imininingwane ibonakala esithombeni. Imvamisa imininingwane ingumbhalo noma ilogo, ekhomba umnikazi wesithombe. Lolo lwazi luhlanganisiwe kulwazi lwesithombe kepha lusabonakala.
I-watermark yedijithali engabonakali- imininingwane efakwe ngaphakathi kwedatha yesithombe yesithombe kepha yakhelwe ukuthi ingatholakali kumbono womuntu ngakho-ke imininingwane efihliwe. I-Steganography isebenzisa inqubo efanayo kepha ngenhloso ehlukile.
Metadata- ulwazi oluchazayo olufakwe ngaphakathi kwanoma yiluphi uhlobo lwefayela. Zonke izinto ezingezansi kwe-EXIF, i-XMP, ne-IPTC yimethadatha efakwa esithombeni. Imethadatha ayishintshi idatha yesithombe yangempela kepha i-piggybacks efayeleni. I-Facebook, iFlickr namanye amapulatifomu wokuxhumana nabantu aku-inthanethi asusa yonke le methadatha (i-EXIF, i-XMP ne-IPTC).
EXIF- I-Exif - Ifomethi yefayela lesithombe eliguquguqukayo (i-Exif) Uhlobo lwemethadatha cishe wonke amakhamera edijithali agcina ngaphakathi kwezithombe. I-EXIF igcina imininingwane engaguquki njengosuku nesikhathi esithathiwe, izilungiselelo zekhamera, isithonjana, izincazelo, i-GPS, ne-copyright. Lolu lwazi aluhloselwe ukuthi lushintshwe kepha lungasuswa ngokuzikhethela ezithombeni. Incazelo isebenzisa amafomethi wefayela we-JPEG, TIFF Rev. 6.0, nama-RIFF WAV, ngokufakwa kwamathegi emethadatha athile. Akusekelwa ku-JPEG 2000, PNG, noma ku-GIF.
I-IPTC- Isakhiwo sefayela kanye neqoqo lezimpawu zemethadatha ezingasetshenziswa kumbhalo, ezithombeni nakwezinye izinhlobo zemidiya. Yakhiwa yi-International Press Telecommunications Council (IPTC) ukusheshisa ukushintshaniswa kwezindaba zamazwe ngamazwe emaphephandabeni nasezinhlanganweni zezindaba.
I-XMP- I-Extensible Metadata Platform (XMP) wuhlobo oluthile lolimi lwe-markup olwandekayo olusetshenziselwa ukugcina imethadatha ezithombeni zedijithali. I-XMP isetshenzisile i-IPTC. I-XMP yethulwe yi-Adobe ngo-2001. I-Adobe, IPTC, ne-IDEAlliance babambisana ukwethula ngonyaka we-2004 i-IPTC Core Schema ye-XMP, edlulisa amanani emethadatha kusuka ezihlokweni ze-IPTC iye kwiXMP yesimanje futhi eguquguqukayo.
Tag- ucezu olulodwa lwemethadatha. Into ngayinye ngaphakathi kwe-EXIF, i-IPTC, ne-XMP umaki.
Izixhumanisi ezixubile nolwazi
I-OS X Lion: Amafomethi we-RAW ekhamera yedijithali asekelwayo
I-Mac OS X v10.6: Amafomethi we-RAW ekhamera yedijithali asekelwayo
Imbobo 3: Kucubungulwa i-RAW Processing
Imbobo 1, 2, 3: Ukuxhaswa kweRAW (kubonakala kufana nohlu lwe-OS X Lion ngenhla)
IWatermark Pro ye-Mac iyabhaleka futhi inesichazamazwi se-Applescript. Lokhu kusho ukuthi ungakwazi ukushintsha indlela iWatermark esebenza ngayo. Manje njengoba iWatermark inaleli khono labasebenzisi (wena) ungenza imibhalo yokwenza i-iWatermark isebenze nezinye izinhlelo zokusebenza ozisebenzisayo. Ngezansi kune-Applescript esilula esingahle singasizi emsebenzini wosuku nosuku kepha sikhombisa ukuthi ungabhala kanjani iWatermark.
Sicela uqonde ukuthi asikwazi ukukusiza wenze i-AppleScript.Singaqashwa ngehora uma unokuthile ofuna ukukwenza futhi ungafuni ukukwenza ngokwakho. Xhumana nathi. Kepha i-AppleScript ilula ukuyifunda futhi iyajabulisa. Qala ngento elula futhi wakhe ukusuka lapho.
Isibonelo Applescript se-iWatermark Pro
Umhlahlandlela Wolimi we-Applescript e-Apple
Sicela usithumelele imibhalo oyakhile noma ngabe ilula kakhulu ukuze sabelane nabanye.
A: Yebo. Thepha ngenhla ku-Isibonelo Applescript ukuze usilande bese ukhetha izithonjana ze-AppleScript ezinkulu + .applescript. Imininingwane eminingi kulokho okwenziwa iskripthi nokuthi isebenza kanjani ngezansi.
Kwakha usayizi wesithombe ngosayizi abakhulu besithombe esingu-1024 x 768 ngemethadatha nesithonjana esingu-256 x 256 (esingenayo imethadatha) efakwe kuqala nge- “thumb_” Thatha ukuthi usethe ezinye izilungiselelo ku-iWatermark Pro njengoba ufisa (ie): - Ukuqamba kabusha ifomethi yokukhipha igama kufanele lisebenzise ithegi "yesiqalo". Sibeka isiqalo ku- “isithupha _” - amafayela wokufaka akhethiwe, - i-watermark ezosetshenziswa, - ifomethi yokukhipha- kanye nenketho engekho ohlwini ngezansi: Iskripthi sishintsha ikhwalithi ye-JPG ibe ngu-85 ezithombeni ezinkulu. Iskripthi sishintsha ikhwalithi ye-JPG ibe ngu-65 yezithonjana zesakhiwo sezithombeOkukhipha kusethwe kumafolda eFlat. Iqamba kabusha isiqalo ku- “Thumb_” Iskripthi singavula / sicishe i-watermarking ngokususelwa kukhulu noma isithonjana futhi… Vula i-Save Metadata bese ususa idatha ye-GPS (indawo ye-GEO) yezithombe ezinkulu. Cisha i-Save Metadata bese ususa idatha ye-GPS isavulelwe izithombe zezithonjana. Setha i-DPI yezithombe ezinkulu ku-300 ekhombisa i-dpi yesithonjana ku-72 dpi
Ulwazi Olukhethekile lwe-Windows Version
Ukwenza ukuthula uthule umugqa womyalo wesifaki se-1.1.3 ngu:
iWatermarkPro.win.x86x64.1.1.2.exe [/ ukufaka | / khipha] [/ uthule] [/ log]
Ukubona usizo lwezimpikiswano zomugqa womyalo
Kunezinketho eziningi ekusizeni komugqa wokuphikisana komugqa kepha izimpikiswano ezilandelayo ziyasekelwa futhi zivivinywe:
Sicela ubheke ngezansi ngezinketho zokusekela ku-iWatermark.
Buyisa Inombolo Yomkhiqizo
Inombolo ye-serial ye-iWatermark ne-iWatermark Pro yehlukile. Uma ungumnikazi we-iWatermark futhi ufuna ukuthuthukisa sicela uxhumane nathi futhi usazise i-imeyili negama o-ode ngaphansi kwalo.
Siyakujabulela ukuzwa kuwe.
Abantu basePlum Amazing
Vikela izithombe zakho
Iphaneli Yezilungiselelo Eziyinhloko
8.I-EXIF / IPTC / XMP